အပွိုငျအဆိုငျ – My Blog
ကြျောထကျတဈယောကျ သူဇာ နဲ့ ခိုငျသူ ညီမနှဈယောကျအလာကို ကြောငျးစာကွညျ့တိုကျအရှမှေ့ စောငျ့နသေညျ။ ကြျောထကျသညျ ထိုညီမနှဈယောကျထဲမှ အကွီးဖွဈသူ သူဇာကိုခဈြခှငျ့ပနျထားသူ တဈယောကျဖွဈသညျ။ သူဇာသညျ ကြောငျးတှငျး Missပွိုငျပှဲတှငျ ဆုရထားသူတဈယောကျဖွဈသညျ။ သူဇာသညျ ယောကျြားလေးတိုငျး ငေးရသောသူ ဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျသူဇာသညျ အရမျးလှသလောကျအရမျးမာနကွီးသူ တဈယောကျလဲဖွဈသညျ။ ထိုသို့သောသူတဈယောကျကိုမှ ကြျောထကျဆိုသညျ့ ကောငျလေးက အရမျးစှဲလမျးကာ ခဈြမိနတေော့သညျ။ ကြျောထကျစောငျ့နစေဉျအတှငျးမှာပဲ သူဇာ သညျ ခိုငျသူနှငျ့ရဲဇျောတို့ အတှဲဘေးမှလမျးလြောကျကာ လာနသေညျ။
ကြျောထကျလဲ သူဇာနားသို့အပွသှေားကာ ပွုံးပွပွီးသူဇာဘေးမှကပျလိုကျလာသညျ။ “သူဇာ ကြှနျတျောသူဇာနဲ့ စကားနညျးနညျးလောကျပွောခငျြတယျ ခှငျ့ပွုပါလားဟငျ” “ကမြရှငျနဲ့ပွောစရာ စကားမရှိဘူး ရှငျကမြကိုမနှောကျယှကျပါနဲ့ ကမြစာကွညျ့တိုကျထဲမှာ စာဖကျစရာရှိတေးတယျ ကမြ မအားဘူး” “ဟာမမကလဲ ကိုကြျောထကျကိုအားနာစရာကွီး မမလဲတဈယောကျထဲနခေဲ့ရမှာကို ကိုကြျောထကျရှိတော့ အဖျောရတာပေါ့မမကလဲ” “ဟုတျသားပဲ မသူဇာကလဲ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ ဒီနလြေ့ောကျလညျမှာလေ မမအဖျောမရှိပဲနမှောပေါ့” “နငျတို့နျော နငျတို့သှားခငျြတိုငျး ငါ့ကိုထိုးထညျ့နတေယျ” “မမကလဲ မာယာမြားမနနေဲ့နျော သိပွီးသား ကိုကြျောထကျ မမကိုအပျ့ခဲ့တယျနျော အဟိ အဆငျပွအေောငျလုပျထားတော့ ညီမတို့ကတော့သှားပွီ” ပွောပွီးသညျနှငျ့ ခိုငျသူနှငျ့ရဲဇျောတို့နှဈယောကျ သူဇာ့ကိုထားကာ ပွေးထှကျသှားကွသညျ။
ကြျောထကျလဲ သူဇာ့နားကပျ ခဈြခှငျ့ပနျကာ အဖွတေောငျးပွီး စကားပွောရငျး ကနျြနရေဈခဲ့သညျ။ “တျောတျောဆိုးတဲ့သူတှေ သူမြားကိုပဈထားခဲ့တယျ ပွနျလာမှတှေ့ဦးမယျ” “သူဇာကလဲ ကိုတဈယောကျလုံးရှိပါတေးတယျကှာ ကိုကသူဇာနားမှာ အမွဲရှိနပေေးမှာ” “ဟှငျ့ ရှငျ့ကိုဘယျသူကလိုအပျ့တယျပွောလို့လဲ လာလာခညျြသေးတယျ” “သူဇာမလိုအပျ့လဲ ကိုကတော့သူဇာ့နားမှာ အမွဲရှိပွီး အမွဲခဈြနမှောဗြ” “ဟားဟား တကယျဟုတျလားမဟုတျလား စောငျ့ကွညျ့မယျလေ” “ကွညျ့စဗြော ကိုကအမွဲရှိနမှော စိတျခနြျော” ရဲဇျောနှငျ့ခိုငျသူတို့သညျ ကြောငျးထဲမှထှကျကာ နရောတဈခုကိုဦးတညျသှားနကွေသညျ။
ထိုနရောကတော့ ရဲဇျောနသေောတိုကျခနျးလေးပငျ ဖွဈသညျ။ ရဲဇျောနှငျ့ခိုငျသူတို့မှာ ခဈြသကျတမျးခွောကျလကြျော ရှိပွီးဖွဈသညျ။ ရဲဇျော၏ စှဲဆောငျမှုကောငျးသောကွောငျ့ ခဈြသူဖွဈပွီး သုံးလအကွာတှငျ ခိုငျသူ့အပြိုစငျဘဝလေးကို ရဲဇျောသိမျးပိုကျလိုကျနိုငျသညျ။ ခိုငျသူသညျchem major ရဲ့ Queen တဈယောကျဖွဈသညျ။ ခိုငျသူကတော့ လူတိုငျးနှငျ့ ဖျောဖျောရှရှေဆေကျဆံတတျသညျ။ လူခဈြလူခငျလညျးမြားသညျ ခိုငျသူ့ကိုလိုကျသညျ့လူမြားလဲ အလှနျမြားသညျ။ ထိုထဲမှ ခိုငျသူ့ကိုစှဲဆောငျနိုငျသော ရဲဇျောကိုအဖွပွေနျပေးကာ ခဈြသူအဖွဈတှဲခဲ့ကွသညျ။ ခိုငျသူနှငျ့ရဲဇျောတို့သညျ တိုကျခနျးလေးပျေါသို့တတျလာကွသညျ။ “မောငျ မမကအရမျးမူတာပဲနျော ခိုငျဆိုရငျမနနေိုငျဘူး ခဏလေးနဲ့အဖွပွေနျပေးလိုကျမိမှာ”။
“ဟုတျတယျနျောခိုငျ မသူဇာက ခဈြနတောကိုအရမျးနနေိုငျတယျ” “ဟုတျတယျ ကိုကြျောထကျကို သနားပါတယျနျော” “ဟငျ့အငျး မောငျကတော့ ကိုကြျောထကျကို အားကတြယျ” “ဟငျ ဘာလို့လဲမောငျရဲ့” “ဟုတျတယျလေ မမကအရမျးလှတယျ ကိုကြျောထကျက မမအခဈြကိုရမှာသခြောတယျလေ မမကအရမျးခဈြဖို့ကောငျးတယျလေ ဟုတျဘူးလား” “မောငျနျော သူမြားမမကိုပွဈမှားနတေယျ ဘာလဲခိုငျ့ကိုခဈြရတာ ရိုးသှားပွီလား” “မဟုတျပါဘူးခိုငျလေးရယျ မောငျကခိုငျးလေးကိုပဲအမွဲခဈြခငျြတာ လာ သကျသပွေမယျ” ရဲဇျောသညျ အခနျးသော့ကိုဖှငျ့ပွီး ခိုငျသူကိုအထဲသှငျးကာ နှုတျခမျးမြားကိုနမျးစုပျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ရဲဇျောလညျပငျးကိုဖကျကာ အနမျးကွမျးမြားဖွငျ့ ပွနျတုနျ့ပွနျနမျးလိုကျသညျ။
ရဲဇျောက ခိုငျသူ၏တငျသားမြားကို စုပျကိုငျကာ အရမျးတှဖေလှယျနကွေသညျ။ ထဘီပါးပါးလေးအောကျက ခိုငျသူ၏တငျသားမြားသညျ တငျးရငျးကာ ရဲဇျောအတှကျ အရမျးကိုငျကောငျးနသေညျ။ ထိုနောကျရဲဇျောက ခိုငျသူ့အကငြ်္ီလေးမှ ကွယျသီးမြားကိုဖွုတျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူ့နို့လေးမြားသညျ ထှားလှသောကွောငျ့ ဘရာလေးထဲမှရနျးထှကျနသေညျ။ ရဲဇျောလဲ ခိုငျသူ့ဘရာလေးကို ပငျ့တငျကာ နို့လေးမြားသို့ လကျတဈဖကျက စုတျနယျရငျး နှုတျခမျးလေးကိုနမျးနသေညျ။ ထို့နောကျရဲဇျောသညျ ခိုငျသူ့လညျပငျးသားလေးကို စုပျကာ နီနီရဲရဲအမှတျကလေးပေးလိုကျသညျ။
“မောငျ ခိုငျ့နို့လေးတှကေိုစို့ပေး မောငျစို့ပေးတာလေးခံခငျြလှပွီ ဟငျ့ဟငျ့” ရဲဇျောကလဲ ခိုငျသူ့နို့လေးတဈဖကျသို့ ကုနျးကာစို့လိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ အရမျးကောငျးကာ ရဲဇျောနို့လေးစိုပေးနတောကို မကျြလုံးလေးမှတျကာ ခံစားနသေညျ။ ခိုငျသူ့နို့သီးခေါငျးလေးကို တဈဖကျကခပြေေးရငျး တဈဖကျကစုပျကာ နမျးပေးနသေညျ။ ထိုနောကျ ရဲဇျောကကွမျးပွငျပျေါတှငျ ဒူးထောကျထိုငျကာ ခိုငျသူ့ဗိုကျသားလေးမြားကို နမျးပေးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက ခိုငျသူ့ထဘီလေးကို ခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ ခိုငျသူ့ပငျတီလေးပျေါမှ ဖုတျလေးကို လြှာလေးနဲ့ထိုးကာ ယကျပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ရဲဇျောခေါငျးကိုကိုငျကာ ဖုတျလေးနှငျ့ပှတျရငျး ကာမအရသာကိုခံနသေညျ။
“မောငျ ခိုငျ့ဖုတျလေးကိုယကျပေး အား…… အရမျးကောငျးတယျမောငျ” “ခိုငျ ပငျတီလေးခြှတျလိုကျနျော မောငျက ခိုငျစောကျစိလေးကို စုပျပွီးနမျးခငျြလို့ ” “အား မောငျကလဲ မောငျခြှတျပေးကှာ ဖုတျထဲကအရမျးယားနပွေီ မောငျမွနျမွနျနမျးပေးတော့ကှာ” ရဲဇျောက ခိုငျသူပငျတီလေးကို ခကျြခငျြးခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျခိုငျသူ့ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို လြှာဖွငျ့ထိုးကာ ဖှဖှလေးယကျပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူလညျး စောကျစိလေးကိုထိမိကာ ကြောထဲကစိမျ့ကာ ကငျြတတျလာသညျ။ ရဲဇျောက ခိုငျသူ့စောကျဖုတျလေးကို နဲနဲဖွဲကာ စောကျစိလေးကို လြှာဖွငျ့ထိုးယကျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲ တီကောငျကိုဆားဖွငျ့တို့သလို တှနျ့လိမျကာ အရမျးကောငျးနသေညျ။ စောကျစိလေးကို စုပျကာ ဖုတျလေးကိုအားရအောငျ စုပျနတေော့သညျ။ ခိုငျသူ့စောကျဖုတျထဲမှလဲ စောကျရညျမြားထှကျကာ အရမျးကောငျးနသေညျ။
ခိုငျသူက ရဲဇျောခေါငျးကိုကိုငျကာ စောကျဖုတျလေးနှငျ့ ပှတျကာ ကာမအရသာကို ခံစားနသေညျ။ “မောငျ ခိုငျးအရမျးလိုခငျြနပွေီ ခိုငျကိုလိုးပေးပါတော့နျော” “လိုးပေးမှာပေါ့ခိုငျရဲ့ နံရံကိုမှီပွီးကုနျးလိုကျနျော” “ဟုတျ လာမောငျ့အဝတျစားတှခြှေတျပေးမယျ” “အတာကွောငျ့ခိုငျ့ကိုအရမျးခဈြရတာ ပွှတျ” ရဲဇျောက ခိုငျသူ့နှုတျခမျးလေးကို တဈခကျြနမျးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျခိုငျသူက ရဲဇျောရဲ့အဝတျစားမြားကို ခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူသညျ ရဲဇျောလီးကွီးဖွငျ့ ခံနကွေဖွဈသျောလညျး တောငျနသေောလီးကွီးကိုမွငျကာ ရငျတှခေုနျနတေော့သညျ။ “မောငျ မောငျ့လီးကွီးက ထောငျမကျနတောပဲ ပွီးတော့အကွီးကွီးပဲနျော” “ခိုငျ့ကိုလိုးခငျြနတောလေ ခိုငျဟိုဘကျလညျ့ပွီးကုနျးပေးတော့နျော”
“အား…..အား…..ဖွေးဖွေးထညျ့မောငျ ခိုငျနာနသေေးတယျ” ရဲဇျောလဲ ခိုငျသူ့စောကျဖုတျလေးထဲသို့ သူ့လီးကွီးကို ဖွေးဖွေးခငျြးသှငျးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ရဲဇျောလီးကွီးကိုမကျြစီမှိတျကာ ခံပေးနသေညျ။ ရဲဇျောက ခိုငျသူ့စောကျဖုတျလေးကို ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးလိုကျသညျ။ “အား….. အား……. မောငျ အရမျးထိတယျကှာ မောငျ့လီးကွီးက သားအိမျကိုထိထိသှားတယျ” “မောငျလိုးပေးတာ ကွိုကျလားဟငျ” “ကွိုကျတာပေါ့မောငျရဲ့ လိုးလိုး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပေး အား……. အရမျးကောငျးတယျ အား… အား……. အား………အှငျ့……..” “ခိုငျ မောငျမောနပွေီကှာ ခိုငျမောငျ့ပျေါကနေ တတျဆောငျ့ပေးနျော” “ဆောငျ့ပေးမှာပေါ့မောငျရဲ့ လာလခေိုငျတို့အခနျးထဲ သှားရအောငျ” ခိုငျသူက ရဲဇျောလီးကိုကိုငျကာ အခနျးထဲသို့ ဦးဆောငျချေါသှားသညျ။
ရဲဇျောကလဲ နောကျကလိုကျရငျး ခိုငျသူ့ဖငျတှကေို လှမျးရိုကျလိုကျသညျ။ “ဖွနျး….ဖွနျး….အား….အား….” “ခိုငျ့အိုးကွီးကို ဘယျသူကမှ ပွိုအောငျဖွိုနိုငျမယျ မထငျဘူးကှာ ခိုငျကအရမျးတောငျ့တာပဲကှာ” “မောငျကတော့ပိုပွီကှာ မောငျလိုးတာနဲ့တငျ ခိုငျပုံပကျြတော့မယျ ဟှငျ့” ရဲဇျောက ကုတငျပျေါတှငျ ပကျလကျအိပျ့ကာ လီးကိုထောငျပေးထားလိုကျသညျ။ ခိုငျသူက ရဲဇျောလီးပျေါကို တတျခှပွီး လီးကိုကိုငျကာ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးထဲသို့ ဆောငျ့သှငျးကာ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ထိုနောကျခိုငျသူက ဆောငျ့နရေငျ ရဲဇျောနှုတျခမျးတှကေို အားရပါးရနမျးရငျး ဆောငျ့နသေညျ။
ရဲဇျောကလဲ ခိုငျသူဖငျကွီးကိုကိုငျကာ အောကျကနပေငျ့ပငျ့ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ “အား………. အား……… မောငျ….. မောငျ….. ပငျ့ဆောငျ့ပေး ခိုငျအရမျးကောငျးနပွေီ” “ခိုငျးပွီးတော့မှာလားဟငျ မောငျလဲအရမျးကောငျးတယျကှာ” “မောငျ…… ခိုငျပွီးတော့မယျ ကွမျးကွမျးလေးဆောငျ့ပေး…. အရမျးကောငျးတယျ… အား……အား…….” ခိုငျသူကလဲ အပျေါကခမျကွမျးကွမျ ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက အောကျပငျ့လိုးရငျး နှဈယောကျလုံး ကာမအထှဋျထိပျ့သို့ ရောကျကာ ပွိုငျတူပွီးသှားကွသညျ။ ခိုငျသူနှငျ့ရဲဇျော ပွနျလာခြိနျတှငျတော့ သူဇာနှငျ့ကြျောထကျတို့သညျ သူမတို့မသှားခငျက ပုံစံမဟုတျတော့တာကို တအံတသွ တှလေို့ကျရသညျ။ သူဇာကကြျောထကျရငျခှငျထဲသို့ ခေါငျးလေးတိုးကာ ခြှဲနတောကိုတှလေို့ကျရသညျ။
ကြျောထကျမကျြနာကလဲ မှိုရတဲ့မကျြနာလို ပွုံးဖွီးနသေညျ။ “အမလေး အမလေး ကွညျ့ပါဦး ကွညျနှုးနလေိုကျတာ မမ ပွောတော့ကတြော့ ရှငျ့ကိုပွောစရာမရှိပါဘူးဆို ခုတော့ဘယျလိုဖွဈတာလဲ” “ခိုငျသူနျော နငျပဲငါ့ကိုမွှောကျပေးပွီးတော့ ခုမှလူကိုလာပွီး အပွဈတငျနတေယျ” “ဟုတျပါပွီတျော ကွညျနူးမနကွေနဲ့တော့ ကြောငျးဆငျးခြိနျရောကျနပွေီ ပွနျကွရအောငျ” “အေးပါအဟေဲ့ သူတို့ကကွသာယာလာပွီးတော့ ဟှနျ့” “ကို သူဇာတို့မနကျဖွနျကွ တှမေ့ယျနျော ကိုအားတယျမို့လား” “အားတာပေါ့သူဇာရဲ့ သူဇာ့အတှကျဆို ကို့ဘဝရဲ့အခြိနျတှအေားလုံးပေးနိုငျတယျ” “ဟားဟား ပိုတယျနျော ကိုကြျောထကျ” “ဟုတျပါပွီကိုရယျ တာ့တာနျော”
ကြျောထကျသညျ သူဇာ့ကိုနှုတျဆကျရငျး ခိုငျသူ့လညျပငျးထကျမှ အနမျးကွမျးကွမျးကွောငျ့ စှနျးထငျလာတဲ့ အမှတျကိုတှလေို့ကျသညျ။ ရဲဇျောတို့လိုးလာပွီဆိုတာ ကြျောထကျမပွောပဲသိလိုကျရသညျ။ ကြျောထကျကလဲ တဈနေ့ ခိုငျသူ့ကိုလိုးမညျဟုကွိတျကာပွဈမှားလိုကျသညျ။ သူဇာနဲ့ကြျောထကျ ခိုငျသူနဲ့ရဲဇျောတို့ဟာ ကြောငျးထဲတှငျ လူတိုငျးအားကရြတဲ့ အတှဲမြားဖွဈလာကွသညျ။ ကြျောထကျနှငျ့ခိုငျသူကလဲ အရငျကထကျပိုနီးကပျကာ ဖငျပုတျခေါငျးပုတျ ပုံစံနှငျ့အနနေီးလာကသြညျ။ သူဇာနှငျ့ရဲဇျောကတော့ အရငျကပုံစံတိုငျး ခငျမွဲခငျကွသညျ။ သိုသျော ရဲဇျောစိတျထဲတှငျ သူဇာကို ကွိတျ၍သဘောကနြခေဲ့သညျ။
ရဲဇျောသညျ ခိုငျသူနှငျ့လိုးသညျ့ အခြိနျမြားထိပငျ သူဇာကိုစိတျထဲတှငျမှနျးကာ ခိုငျသူ့ကိုလိုးလာသညျ။ ကြျောထကျကတော့ ခုခြိနျထိ သူဇာ့ကိုနို့ကိုငျရုံ နှုတျခမျးလေးနမျးရုံသာ အခှငျ့ရေးရသေးသညျ။ ခိုငျသူနှငျ့ရဲဇျောကတော့ အမွဲလိုလို ခြိနျးတှကေ့ာ လိုးဖွဈကွသညျ။ ရဲဇျောကတော့သူဇာ့ကိုလိုးရနျ အခှငျ့ရေးကိုစောငျ့နသေညျ။ တဈနေ့ သူဇာသညျ ခိုငျသူ့ဖုနျးထဲမှ ပုံမြားကူးရနျ ဖုနျးကိုယူကာ ပုံမြားကူးနလေိုကျသညျ။ ထိုခြိနျတှငျ ခိုငျသူ့ဖုနျးထဲမှ သူဇာ့ရငျကို ဗွောငျးဆနျသှားစသေော ပုံတဈပုံကို အမှတျမထငျတှလေို့ကျရသညျ။ ထိုပုံထဲတှငျ ကြျောထကျနှငျ့ခိုငျသူတို့ အဝတျစားမြားမပါပဲ အခနျးတဈခနျးထဲတှငျ နှုတျခမျးခွငျးနမျးနကွေသညျ။ ထိုပုံမှdateကို သူဇာကွညျ့လိုကျသညျ။ ကြျောထကျတဈယောကျ စောငျ့နကွေနရောမှ သူဇာတို့အလာကို စောငျ့နသေညျ။
ခဏအကွာတှငျ ခိုငျသူတဈယောကျထဲ ကြျောထကျရှိရာသို့ ရောကျလာသညျ။ “ကိုကြျောထကျ စောငျ့နတောကွာပွီလား ခိုငျသူနဲနဲနောကျကသြှားတယျ” “မကွာသေးပါဘူး ခိုငျသူရဲ့ ဒါနဲ့သူဇာနဲ့ရဲဇျောရော” “မပါဘူးကိုကြျောထကျရဲ့ မမကနမေကောငျးလို့တဲ့ မောငျကတော့ရှာပွနျသှားတယျ” “ဟုတျလား အတာဆို အကိုတို့တော့ ဘကျပဲ့ပါပွီ” “ခိုငျသူရှိနတောပဲ ဘာမှအားမငယျပါနဲ့ အျော ဒါနဲ့ကိုကြျောထကျ ခိုငျသူ့ကို supermarket လိုကျပို့ပါလား ကိုကြျောထကျ အားရငျပေါ့” “အခြိနျရတာပော့ အကိုလဲတဈယောကျထဲဆိုတော့ သှားကွမယျလေ” ဆကျရနျ….. ကြျောထကျကားလေးနှငျ့ ခိုငျသူတို့နှဈယောကျ ကြောငျးထဲမှထှကျ လာကွသညျ။
လမျးတှငျခိုငျသူက ဝိုငျသောကျခငျြသညျ ဆိုသောကွောငျ့ ကြျောထကျနှငျ့ ခိုငျသူတို့နှဈယောကျ ဝိုငျပုလငျးမြားနှငျ့ ဘီယာမြားဝယျကာ အေးဆေးသောနရော သို့ထှကျလာကွသညျ။ ကြျောထကျ၏ အကွညျ့မြားကို ခိုငျသူရိပျ့မိနသေညျဖွဈသညျ။ ခိုငျသူသညျ နညျးနညျးမူးလာသောကွောငျ့ စကားပွောမြားလဲရဲလာခဲ့သညျ။ ခိုငျသူ၏စိတျထဲတှငျလညျး ကြျောထကျကို ကွိတျကာကွှနေသေညျ။ “ကိုကြျောထကျ ဘယျလိုလဲ မမနဲ့ကဘယျအဆငျ့ထိ ရောကျနကွေပွီလဲ” “ဘယျအဆငျ့မှ မရောကျသေးပါဘူးဟာ မငျ့းမမက အရမျးမူနလေို့” “ဟားဟား အတာဆို ကိုကြျောထကျခုထိမစားရတေးဘူးပေါ့”
“အေးပေါ့ဟ မငျးကတော့ ရဲဇျောကိုပေးတယျမို့လား ငါသိနတေယျ” “ပေးတယျ ဒါပမေဲ့ ရဲဇျောကခွရှေုပျတယျ အပွငျကလူတှနေဲ့လဲနတေယျ အတာတှကေို ညီမမကွိုကျဘူး” “ဟုတျလား မငျးကမထိနျးဘူးလား” “ထိနျးတာပေါ့ ဒါပမေဲ့မရဘူး ညီမသူ့ကိုမကနြေပျဘူး လကျစားခခြေငျြတယျ ကိုကြျောထကျ ကူညီမလား” “ဟငျ ငါကဘယျလိုကူညီရမှာလဲ ဘာလဲ ရဲဇျောကိုပွောပေးရမှာလား” “ညီမလဲသူ့လို အပွငျမှာနမေယျလေ ခုတောငျသူ့ရှာဖကျက အဆကျစီသှားတာတဲ့” “ဖွဈပါ့မလားဟ သူဇာသိရငျ ပွသနာတတျနဦေးမယျ” “ဟာ ကိုကြျောထကျကလဲ မမ မသိအောငျနမှောပေါ့ ဘာလဲမကူညီခငျြဘူးလား ကိုကြျောထကျမကူညီနိုငျလဲ ညီမတဈခွားတဈယောကျစီ သှားလိုကျမယျ”။
“အလိုမဟုတျပါဘူးဟာ မသငျ့တျောဘူးထငျလို့ပါ ငါကကူညီခငျြပါတယျဟ” ကြျောထကျလဲ စားရခံကွုံနသေညျမို့ လကျလှတျမခံပဲ နှဈယောကျသား ဟျောတယျသို့ သှားခဲ့ကွသညျ။ ခိုငျသူတဈယောကျ ဟျောတယျသို့ရောကျခြိနျတှငျ အရမျးကိုမူးနပွေီဖွဈသညျ။ ခိုငျသူက ရခြေိုးခငျြသေးသညျဟု ဆိုကာ ရခြေိုးခနျးထဲသို့ ဝငျသှားသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့ကို အပွငျကစောငျ့ရနျ ထိုငျနလေိုကျသညျ။ ခဏအကွာတှငျ ခိုငျသူက တဘကျ အပါးလေးကိုပတျကာ ပွနျထှကျလာသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့ကို မကျြလုံးကြှတျကမြတတျကွညျ့နသေညျ။ “ကိုကြျောထကျ ခိုငျသူတဈယောကျထဲ ခြိုးရမှာ ပငျြးတယျ ကိုကြျောထကျလဲ ခိုငျသူနဲ့အတူ ရလောခြိုးလေ” ထိုခြိနျတှငျ ကြျောထကျလဲ အခြိနျစိုငျးမနပေဲ ခိုငျသူ့နောကျမှလိုကျသှားသညျ။
ရခြေိုးခနျးထဲတှငျ ခိုငျသူက သဘကျလေးကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။ အနကျရောငျအတှငျးခံလေးမြားနှငျ့ ခိုငျသူက အရမျးဆကျစီကနြသေညျ။ ကြျောထကျလဲ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပဲ ခိုငျသူ့ခါးလေးကိုဖကျကာ နှုတျခမျးလေးကို စုပျနမျးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ပွနျကာနမျးသညျ။ ကြျောထကျလကျက ခိုငျသူ့ပငျတီလေးထဲထိုးတာ ဖုတျလေးကိုပှတျကာ စောကျစိလေးကို ခပြေေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ဖီးတှတေအားထနျပွီး အရညျတှပေါစိုနသေညျ။ ကြျောထကျလီးကလဲ ဘောငျဘီထဲမှ ရုနျးထှကျနသေညျ။ ခိုငျသူက အလိုကျသိစှာ ကြျောထကျဘောငျးဘီကို နမျးရငျခြှတျလိုကျသညျ။
ဘောငျးဘီထဲမှ ထှကျလာသော ကြျောထကျလီးကွီးကို ကိုငျကာဂှငျးထုပေးနသေညျ။ ခိုငျသူက အနမျးကိုရပျလိုကျပွီး ကြျောထကျရငျဘကျကို နှုတျခမျးလေးနှငျ့ ကပျကာ လိုကျနမျးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျခိုငျသူက အောကျသို့ဒူးထောကျထိုငျကာ ကြျောထကျလီးကို နှုတျခမျးလေးနှငျ့ ပှတျကာပေးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျနှုတျခမျးလေးနှငျ့ ကြျောထကျလီးဒဈကို ငုံကာစုပျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူက လီးဒဈလေးကို လြှာနှငျ့ပတျကာ မှကောစုပျနမျးပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူစုပျပေးတာ အရမျးကောငျးသောကွောငျ့ မကျြလုံးကိုမှိတျကာ ကာမအရသာကို ခံစားနသေညျ။
အား…….အား……….အရမျးကောငျးတယျ ခိုငျသူရယျ မငျးကအရမျးစုပျတတျတာပဲကှာ” “မငျးနှုတျခမျးလေးကိုတော့ စှဲသှားပွီး ခိုငျသူရယျ” ကြျောထကျလဲ အရမျးအရှိနျတတျကာ ခိုငျသူ့ခေါငျးကိုကိုငျးပွီ လီးကွီးကိုစောငျ့စောငျ့ထညျ့နလေိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျပေါငျကိုကိုငျကာ လီးကွီးကို အဆုံးထိရောကျအောငျ စုပျပေးနသေညျ။ ကြျောထကျက လီးကွီးကို ခိုငျသူ့ပါစပျထဲ အဆုံးထိဝငျအောငျ ထညျ့ကာ ညောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ အရမျးကောငျးကာ ခိုငျသူ့ပါးစပျထဲသို့ လရညျမြားပနျးထုပျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ထှကျလာသောလရညျမြားကို အကုနျစငျအောငျ မြိုခလြိုကျသညျ။ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့ကိုထူကာ သူ့လီးကွီးကိုစုပျထားသော နှုတျခမျးမြားကို တတျမကျစှာ စုပျနမျးလိုကျသညျ။
ထိုနောကျ ခိုငျသူနှငျ့ကြျောထကျတို့သညျ ရစေိမျကနျတှငျ ရစေိမျရငျး ရခြေိုးကာဇိမျခံနကွေသညျ။ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့ဖုတျလေးကို ပှတျပေးနသေညျ။ လကျတဈဖကျကလဲ ခိုငျသူ့နို့လေးမြားကို စုတျကိုငျနသေညျ။ ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျဘကျသို့စောငျးကာ နှုတျခမျးမြားကို စုပျကာနမျးနသေညျ။ ခိုငျသူသညျ စောကျဖုတျလေးသို့ရောကျနသေော ကြျောထကျလကျမြားကို ပှတျကာ ကာမအရသာကိုခံစားနသေညျ။ ကြျောထကျလဲ လကျနှဈခြောငျးပူးကာ ခိုငျသူ့စောကျဖုတျလေးထဲသို့ ထိုးကာမှပေေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူ့စောကျဖုတျလေးမှာ ကြျောထကျလကျကို အထဲမှနေ၍ ညဈပေးနသေညျ။
ကြျောထကျလဲ စောကျဖုတျလေးကို ခမျကွမျးကွမျးမှပေေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲအရမျးကောငျးကာ ကော့ပြံနတေော့သညျ။ ကြျောထကျက ခိုငျသူဖုတျလေးထဲမှ လကျကိုနုတျကာ စောကျစိလေးကို ဖိကာပှတျပေးလိုကျခြိနျတှငျ ခိုငျသူလဲ ကာမအရသာရဲ့ အထှဋျထိပျ့ကိုရောကျကာ ပွီးသှားသညျ။ ထိုနောကျ ခိုငျသူနှငျ့ကြျောထကျလဲ တဘကျလေးမြားကို ပတျကာ အိပျ့ယာပျေါတှငျဖကျရငျး အမောဖွကောအနားယူနကွေသညျ။ ထိုခြိနျတှငျခိုငျသူက “ကိုကို ခိုငျသူဖုတျလေးကို ကိုကို့နှုတျခမျးလေးတှနေဲ့ အနမျးပေးပါဦးနျော” ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့တဘကျလေးကိုဖွညျကာ စောကျဖုတျထကျက ဆီးဂုံထကျပိုငျးလေးကို စနမျးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူ့ဖုတျလေးက ရဲဇျောလိုးထားသောလဲ ပုံတော့သိပျ့မပကျြသေးပေ။ ဖုတျလေးမှာ ဖောငျးဖောငျးလေးနှငျ့ ခဈြဖို့ကောငျးနသေညျ။
ခိုငျသူကလဲ ပေါငျလေးကိုကားပေးလိုကျပွီး ကြျောထကျခေါငျးကိုကိုငျကာ ဖုတျလေးဖွငျ့ကော့ကာ ပှတျနသေညျ။ “ကိုကို” “ဟငျ ပွောလေ ခိုငျသူရဲ့” “ကိုကိုကပကျလကျလေးနပေေး ခိုငျသူက ကို့ကိုနှုတျခမျးလေးပျေါကို ဖုတျလေးနဲ့ပှတျပွီး အရသာခံခငျြလို့” “လုပျလခေိုငျသူရဲ့ ခိုငျသူကအရမျးလုပျတတျတာပဲကှာ” ကြျောထကျလဲ အိပျ့ရာပျေါတှငျ ပကျလကျလှနျပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျပျေါလို့ခှကာ မကျြနာပျေါ ဖုတျလေးနှငျ့ ပှတျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့ဖုတျလေးကို လြှာလေးနဲ့ထိုးကာ ယကျပေးနလေိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲအရမျးဖီးမြားတတျကာ သူ့နို့မြားကိုပွနျကာ နယျရငျးပှတျနလေိုကျသညျ။
“ကိုကို ခိုငျသူမနနေိုငျတော့ဘူးကှာ ကိုကိုလုပျပေးတော့” ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့ကို လဲပွီးတော့ အပျေါမှ လှကွေီးထိုးရိုးရိုပုံစံနှငျ့ တနျးလိုကျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူ့အဖုတျမှာ အရငျထဲက အရညျတှစေိုနပွေီမို့ လိုးရတာအရမျးကောငျးနသေညျ။ ခိုငျသူ့ဖုတျကလဲ အရမျးညဈအားကောငျးသောကွောငျ့ အပြိုလိုးရတာထကျပငျ ပို၍ကောငျးနသေညျ။ ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျလညျပငျးကိုဖကျကာ နှုတျခမျးမြားကို အတငျးနမျးနသေညျ။ “အား…….အား…… “ခိုငျသူရယျ မငျးဖုတျလေးက အရမျးကောငျးတယျကှာ မငျးဖုတျလေးကို အမွဲလိုးခငျြတယျကှာ ကိုကိုပဲအမွဲလိုးနျော ကိုကို့လီးကွီးကိုကွိုကျတယျ အား…. အား…. ဆောငျ့လိုးပေး…. အား…… အရမျးကောငျးတယျ..အရမျးကောငျးတယျ ခိုငျသူရယျ။
မငျးဖုတျလေးနဲ့ညှဈပေး အား….. ကောငျးလိုကျတဲ့ဖုတျလေးကှာ” “အား….. လိုး……. လိုး…. ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပေး အရမျးကောငျးတယျ ” အား…… အား….. ခိုငျသူပွီးတော့မယျ အား…….”ကောငျးလားခိုငျသူ ငါလိုးပေးတာကောငျးလား” “အား…. အား….. အှငျး…….. အှငျး…….. ခိုငျသူပွီးပွီး အရမျးကောငျးတယျကိုကိုရယျ” ကြျောထကျဆောငျ့ခကျြပွငျးပွငျးဖွငျ့ ဆောငျ့လိုးပေးလိုကျသောကွောငျ့ ခိုငျသူခဏလေးတငျပွီးသှားသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူပျေါတှငျမှောကျကာ နှုတျခမျးခငျြးဂဟဆေကျကာ အနမျးပေးရငျးအမောဖွနေကွေသညျ။ ခိုငျသူ့ဖုတျလေးသညျ လီးကွီးကိုညဈကာ ကာမအရသာမြားကို အပွညျ့ဝခံစားနသေညျ။ ခိုငျသူတဈခြီပွီးသှားသျောလညျး ကြျောထကျလီးကွီးက တောငျနဆေဲဖွဈသညျ။
“ကိုကို ကိုကိုမပွီးတေးဘူးလားဟငျ” “မပွီးတေးဘူးလေ ခိုငျသူရဲ့” “အတာဆို ကိုကိုဆကျလိုးလေ ခိုငျသူဘယျလိုနပေေးရမလဲဟငျ” “ခိုငျသူ့ကို ရဲဇျောက ဖငျလိုးပွီးပွီလားဟငျ” “ဟငျ့အငျး မလိုးပါဘူးကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုကဖငျလိုးမလို့လား” “ဟုတျတယျ ကိုကိုခိုငျသူ့ဖငျကိုလိုးခငျြလို့” “ဟငျ့ဟငျ့ ခိုငျသူနာမှာကွောကျတယျ” “မနာပါဘူး ခိုငျသူရဲ့” “ခိုငျသူကွောကျတယျ ကို့ကိုလီးကွီးက အကွီးကွီပဲ” “ဖွေးဖွေးလေးပဲ လုပျမယျနျော ခိုငျသူမခံနိုငျရငျ ဆကျမလုပျဘူးနျော” ခိုငျသူလဲ ရဲဇျောကိုအရှဲတိုကျခငျြတာနှငျ့ ကြျောထကျကို ဖငျလိုးခံရနျ အသငျ့ပွငျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့ဖငျလေးကိုဖွဲကာ ဖငျပေါကျလေးထဲကို တံတှေးထှေးထညျ့လိုကျသညျ။ ပွီးမှလကျတဈ ခြောငျးစထိုးလိုကျသညျ။
ခိုငျသူ့ဖငျလေးက ပါကငျလေးမို့ ကွပျနသေညျ။ ကြျောထကျလဲ လကျခြောငျးလေးနှငျ့ ခိုငျသူ့ဖငျလေး အဝငျထှကျကောငျးအောငျ လုပျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျ လကျတဈခြောငျးထဲနှငျ့ အသှငျးထုပျကောငျးခြိနျတှငျ လကျနှဈခြောငျးဖွငျ့ထိုးကာ ခြဲ့ပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲ စိတျထဲတှငျမရိုးမယှဖွဈကာ စောကျဖုတျထဲမှ ယားတတျလာသညျ။ “ကိုကို ခိုငျသူ့ဖငျကိုလိုးပေးတော့ ခိုငျသူအရမျးခံခငျြနပွေီကှာ” “လိုးပေးမှာပေါ့ ခိုငျသူရဲ့ ဖငျလေးကိုဖွဲပေးထားနျော” ကြျောထကျက ခိုငျသူဖွဲပေးထားသော ဖငျလေးကို လီးဒဈကွီးဖွငျ့တလေို့ကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ဖငျးကွီးကို လိုးကောငျးစရေနျ ပွဲသထကျပွဲအောငျ ဖွဲပေးထားသညျ။ ကြျောထကျသညျ ခိုငျသူ့ဖငျကို တံတှေးနညျးနညျးစှတျကာ လီးဒဈကွီးထိုးစိုကျပွီး လိုးလိုကျသညျ။
“အား…….အား……..ကိုကိုဖွေးဖွေး” ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့ဖငျလေးထဲသို့ အားစိုကျကာ ထပျထိုးခလြိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲ အရမျးနားသှားသောကွောငျ့ ကော့ပြံသှားသညျ။ ထို့နောကျ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့ပျေါသို့ မှောကျကာ လညျဂုတျသားလေးကိုနမျးရငျး နို့လေးစိုကခကြော ညှောငျ့ပေးနလေိုကျသညျ။ ခိုငျသူက ခဏအကွာတှငျ နောကျသို့ပွနျကာ ဆောငျ့ဆောငျ့ပေးလာသညျ။ ခိုငျသူကောငျးနတောကိုသိသော ကြျောထကျက ခိုငျသူခါးလေးကိုကိုငျကာ ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ အရမျးကောငျးကာ စောကျဖုတျလေးကို လကျလေးမြားဖွငျ့ပှတျကာ ကြျောထကျဆောငျ့သမြှကို ခံနသေညျ။
“အား……. အား……. ကောငျးလိုကျတာ ကိုကိုရယျ ခိုငျသူ့ဖုတျလေးထဲလဲ အရမျးယားတာပဲ” “အား…….. အား……… မငျးဖငျလေးကစီးနတောပဲကှာ လိုးရတာအရမျးကောငျးတာပဲ ခိုငျသူလဲ ပွနျဆောငျ့ပေးလေ” “ကိုကိုမောနပွေီလားဟငျ ခိုငျသူအပျေါကတတျဆောငျ့ပေးမယျလေ” “ကောငျးတာပေါ့ခိုငျသူရဲ့ လာ ခိုငျသူက အရမျးအလိုကျသိတာပဲကှာ” ခိုငျသူက ကြျောထကျပေါ့သို့ခှကာ ထောငျပေးထားသော လီးကွီးကိုကိုငျကာ ဖငျထဲတကေ့ာ ဆောငျကာထိုငျခလြိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ အောကျမှနေ၍ ခိုငျသူ့နို့လေးမြားကို ကိုငျနလေိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲ ဖုတျလေးကိုပှတျကာ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနလေိုကျသညျ။ ကြျောထကျနဲ့ခိုငျသူလဲ မီးကုနျရမျးကုနျးလိုးလိုကျကွသညျ။ ခိုငျသူက အပျေါကဆောငျ့နရေငျး ၁၅မီးနဈအကွာတှငျ ပွီးသှားသညျ။
ကြျောထကျလညျး အောကျကထပျဆောငျ့ရငျး ခဏကွာတှငျ ပွီးသှားတော့သညျ။ ရဲဇျောလဲ ကြောငျးကအပွနျတှငျ ရေးမိုးခြိုးကာ အနားယူရငျး အခနျးထဲတှငျ တဈယောကျထဲ အခဈြတက်ကသိုလျမှစာမြားကို ဖကျနသေညျ။ ထိုခြိနျတှငျ အခနျးရှမှေ့ လူချေါဘဲလျတီးသံ ကွားလိုကျရသညျ။ ရဲဇျောလဲ ပုဆိုးကို သခြောပွငျဝတျပွီး အခနျးတခါးကို သှားဖှငျ့လိုကျသညျ။ “ဟာ မသူဇာ ဘာကိစ်စရှိလို့လဲဟငျ” ရဲဇျောသညျ သူဇာ့ကိုမွငျသညျနှငျ့ ကာမစိတျမြားတတျကွှလာသညျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူဇာက မွနျမာဝတျစုံလေးနှငျ့ နို့မြားတငျမြားက တငျးရငျးကာ ယောကျြားသားတိုငျး မကျြစီကလြောကျအောငျ လှနသေညျ။ ထို့နောကျ ရဲဇျောလဲ သူဇာ့ကိုအခနျးထဲချေါကာ ဧညျ့ခံစားပှဲတှငျ ထိုငျကာဆကျမေးလိုကျသညျ။
“မသူဇာ ဘာဖွဈလာတာလဲဟငျ မကျြနာလဲမကောငျးပါလား” “မမ ကြျောထကျနဲ့ ရနျဖွဈလာတယျ ဘာကွောငျ့လို့ထငျလဲ” “ဘာကွောငျ့လဲမသူဇာရဲ့ ကိုကြျောထကျက ဘာအမှားလုပျမိလို့လဲ” “အမှားလုပျတာပေါ့ အကွီးကွီးကိုမှားတာ သူမမကှယျရာမှာ ဖောကျပွနျတယျလေ ” “ဟာ ဟုတျလားမသူဇာရဲ့ ဘယျသူနဲ့လဲ” “မငျးအံသွသှားမလားတော့မသိဘူး မငျးခဈြသူခိုငျသူနဲ့ဖောကျပွနျတာ ” “ဗြာ ခိုငျသူနဲ့ဟုတျလား လုပျရကျလိုကျတာဗြာ” ရဲဇျောလဲ ခေါငျးကိုငိုကျစိုကျကသြှားသညျ။ သူအပွငျမှာ ခွရှေုပျတာမှနျသျောလညျး ခိုငျသူထိုကဲ့သို့ လုပျလိမျ့မညျဟုမထငျခဲ့ ခုတော့ရဲဇျော ဘာမှမတတျနိုငျတော့ ။ သူဇာက ရဲဇျောကိုစိုကျကာ ကွညျ့နသေညျ။ ရဲဇျောခေါငျးကိုမော့ကာ သူဇာကိုကွညျ့လိုကျခြိနျတှငျ နှဈယောကျသား မကျြလုံးခငျြးဆုံသှာသညျ။ သူဇာက ရှကျပွုံးလေးနှငျ့ ခေါငျးကိုပွနျငုံ့သှားသညျ။ ကြျောထကျလဲ ထိုအခွနေကေို သဘောပေါကျသှားပွီ ဖွဈသညျ။ ရဲဇျောကွိတျကာ ကွှနေသေောဆျောကွီးက ရှတှေ့ငျအထာလာပေးတော့ ရဲဇျောလဲ အမိဖမျးဖို့ ပွငျလိုကျတော့သညျ။ ထိုနောကျ ရဲဇျောလဲ သူဇာထိုငျနသေောဘကျသို့ ပွောငျးထိုငျလိုကျသညျ။ “မသူဇာ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ သူတို့ကို လကစားခကြွေရအောငျ” “ဟငျ မငျးကဘယျလို လကျစားခမြှောလဲကှ ပွောပွလေ မမလဲလကျစားခခြေငျြတယျ” “ဟာမမကလဲ လှယျပါတယျ သူတို့နှဈယောကျလို ကြှနျတျောတို့လဲနကွေမယျလေ” “ဟာမငျးကလဲကှာ” သူဇာရှကျကာ ခေါငျးလေးကိုငုံကာ လကျလေးနှဈဖကျကို စုတျကိုငျပါနသေညျ။ တကယျတော့ သူဇာလဲ ရဲဇျောနှငျ့အတူတူနရေနျ လာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ရဲဇျောလဲ သူဇာ့ကို ပခုံးလေးမှစဖကျကာ ရငျခှငျထဲကို ထညျ့လိုကျသညျ။ သူဇာကလဲ အလိုကျသငျ့လေး ရဲဇျောရငျခှငျထဲသို့ ဝငျရောကျခဲ့သညျ။ ရဲဇျောက သူဇာ့ခေါငျးလေးကိုမော့ကာ နှုတျခမျးလေးကိုစနမျးလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ ရဲဇျောပေးသော အနမျးမြားကိုခံယူရငျး ရဲဇျောကိုဖကျကာ အနမျးမြားကိုပွနျပွီး နမျးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောလကျမြားကလဲ သူဇာထဘီးလေးပျေါမှ ပေါငျကိုပှတျကာ ရကျမကျပွငျးပွငျးဖွငျ့ နမျးနကွေသညျ။ ထိုနောကျ သူဇာ့ပေါငျကွား ရောကျသှားပွီး ထဘီးပျေါမှ ဖုတျလေးရှိရာသို့ ပှတျလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ အပြိုဖုတျလေးကို ကိုငျခံလိုကျရသောကွောငျ့ ကွကျသီးမြားထကာ သှားသညျ။ ရဲဖျောရဲ့ပှတျပေးမှုကွောငျ့ သူဇာလဲရဲဇျောကို တအားဖကျကာ ထားလိုကျသညျ။ ထိုနောကျရဲဇျောက သူဇာ့လညျပငျးလေးကို ဆငျးကားနမျးပေးလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ အနမျးမို့ကွကျသီးမှေးညငျးပါ ထသှားသညျ။ သူဇာကလဲ ရဲဇျောပေါငျးကွားသို့ လကျရောကျသှားပွီး ရဲဇျောလီးကွီးကို ပုဆိုးပျေါမှကိုငျကာ ထုပေးနလေိုကျသညျ။ ကြျောထကျကို ထုပေးနကွေမို့ သူဇာကအလိုကျသိ ထုပေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုနောကျရဲဇျောက သူဇာရငျဖုံး အကငြ်္ီလေးမှ ကွယျသီးလေးမြားကိုဖွုတျပေးလိုကျသညျ။ သူဇာမှာ ဘျောလီအနီရောငျလေးနှငျ့ အရမျးစှဲဆောငျမှူ ကောငျးနသေညျ။ ရဲဇျောကလဲ သူဇာ့နို့လေးမြားကို ဖှဖှလေးကိုငျကာ ပှတျပေးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျရဲဇျောက သူဇာ့ကိုဖကျကာ ဘျောလီခြိတျလေးကို ဖွုတျလိုကျသညျ။ သူဇာနို့လေးမြားမှာ အပြိုနို့လေးမို့ တငျးရငျးကာ လုံးကဈြနသေညျ။
သူဇာလဲ နညျးနညျးရှကျသှားကာ ရဲဇျောကို မကျြနာမမွငျအောငျ ဖကျထားလိုကျတော့သညျ။ ရဲဇျောကတော့ သူဇာ့နို့လေးမြားကို ကုနျးကာစို့လိုကျသညျ။ ထိုနောကျရဲဇျောက သူဇာ့ကိုခြီကာ အခနျးထဲသို့ချေါသှား လိုကျတော့သညျ။ ရဲဇျောကသူဇာ့ ထဘီးလေးကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။ ပငျတီအနီရောငျလေးနှငျ့ ဖောငျးဖောငျးလေးဖွဈနသေော သူဇာ့ဖုတျလေးက ရဲဇျောရဲ့ကာမ ရမကျကို ပို၍ထနျလာစသေညျ။ သူဇာ့ပငျတီလေးမှာလဲ အဖုတျလေးမှထှကျလာသော အရညျမြားနှငျ့ စိုရှဲကာနသေညျ။ ရဲဇျောကလဲ သူဇာ့ဖုတျလေးကို ပငျတီလေးပျေါမှ ဖိကာနမျးလိုကျသညျ။ သူဇာက စောကျဖုတျလေးကို ခုမှပထမဆုံး နမျးခံရသညျဖွဈသောကွောငျ့ တှနျ့တှနျ့လူးကာ သှားသညျ။ ရဲဇျောက သူဇာ့ဖုတျကှဲကွောငျးလေးကို ပငျတီလေးပျေါမှ ပှတျပေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ သူဇာ့ပငျတီလေးကိုခြှတျကာ စောကျစိလေးကို ငုံစုပျလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ ရဲဇျောခေါငျးလေးကို ကိုငျကာ ရဲဇျောစုပျနမျးကာဂြာပေးသမြှကို မှိနျးကာခံနသေညျ။ ထိုနောကျ “ရဲဇျောရယျ မမကိုခဈြပေးပါတော့ကှာ မမပနျးလေးထဲက အရမျးယားနပွေီကှာ” “လိုးပေးမှာပေါ့မမရဲ့ ဒါပမေဲ့ မမကပွောငျးပွောပေးနျော မမပွောတာလေး နားထောငျခငျြလို့” “ဟာကှာ ရဲဇျောကလဲ တအားညဈတာပဲ ကဲ မမကိုလိုးပေးပါတော့ကှာ မမခံခငျြလှပွီ” “ဒီလိုမှပေါ့မမရဲ့ မမပေါငျလေးကားထားနျော” သူဇာလဲ ရဲဇျောပွောသညျ့အတိုငျး ပေါငျလေးကို ကားထားပေးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက စောကျရညျတှနှေငျ့ စိုရှဲနသေော သူဇာ့စောကျဖုတျလေးထဲကို သူ့ဒဈဖူးကွီးကို ထိုးထညျ့လိုကျသညျ။
“အား….. မောငျ….. နာတယျကှာ ဖွညျးဖွညျးလုပျပါ” “မမက ခုမှအပြိုပဲရှိတေးတာလားဟငျ” “ဒါပေါ့ကှ မမဘယျသူနဲ့မှ မခံဘူးသေးဘူး” “ဟာ ကြှနျတျောအရမျး ကံကောငျးတာပဲဗြာ မမကိုအရမျးခဈြသှားပွီးဗြာ” ရဲဇျောလဲအရမျးပြျောကာ သူဇာ့နှုတျခမျးလေးကိုနမျးရငျး လီးကွီးကိုညှောငျ့ကာ သှငျးလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ သူမ၏ အပြိုစောကျဖုတျလေးထဲသို့ တိုးဝငျလာသော လီးကွီးဒဏျကိုကွိတျခံရငျး ရဲဇျောကိုတအားဖကျထားလိုကျသညျ။ ရဲဇျောလဲ သူဇာကို ဖွေးဖွေးညှောငျ့ကာလိုးရငျး လီးကွီးကို အဆုံးထိရောကျအောငျ လိုးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ လီးကွီးကို ညှောငျ့ကာလိုးရငျး သူဇာခံနိုငျခြိနျမှ လီးကွီးကို တဈဝကျလောကျထိထုပျကာ ခပျစပျစပျလေး ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။
“အား…… အား…… မောငျ့လီးကွီးက အကွီးကွီးပဲကှာ မမစောကျဖုတျလေးထဲမှာ ပွညျ့ကွပျနတောပဲကှာ” သူဇာလဲ ပေါငျကိုးပေးထားရငျး ရဲဇျောလိုးသမြှကို ပါစပျမှတတှတျတှတျပွောရငျး အလိုးခံနသေညျ။ ရဲဇျောလဲ သူဇာခံနိုငျပွီးဆိုတာ သိသောကွောငျ့ အားဖွငျ့ ဆောငျ့ကာဆောငျ့ကာ လိုပွဈလိုကျသညျ။ “အား…..အား…… အား… “ကောငျးလိုကျတာမမရယျ မမစောကျဖုတျးလေးက စီးကွပျ့နတောပဲဗြာ” “မမလဲအရမျးကောငျးတယျကှာ လိုးလိုး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုပေး မငျးလီးကွီးကိုအရမျးကွိုကျတယျ” ထိုနောကျရဲဇျောလဲ သူဇာ့ကို ကုနျးခိုငျးကာ နောကျမှဆောငျ့လိုးရနျ ပွငျဆငျလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ ကုတငျပျေါတှငျ လကျထောကျကာ ရဲဇျောအလိုးကိုခံရနျ ကုနျးပေးလိုကျသညျ။
နောကျသို့ဖောငျးကာ ထှကျလာသော သူဇာ့စောကျဖုတျကွီးကို ရဲဇျောက အနမျးတဈခကျြပေးလိုကျသညျ။ ပွီးမှလီးကွီးကိုကိုငျကာ သူဇာ့စောကျဖုတျထဲသို့ ထိုးထညျ့ကာ ဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ ရဲဇျောက သူဇာ့ဖငျကွီးကိုကိုငျကာ နောကျမှ တအားဆောငျ့ကာဆောငျ့ကာ လိုးနသေညျ။ သူဇာ့ဖငျကွီးကလဲ ရဲဇျောဆောငျ့လိုကျတိုငျး ခါရမျးကာနသေညျ။ ရဲဇျောဆောငျ့အားကွောငျ့ သူဇာလကျပငျ မထောကျထားနိုငျတော့ပဲ ဖငျကွီးကိုထောငျကာ ဝတျပွီးခံနလေိုကျသညျ။ အား… အား…… အား….. “ကောငျးလိုကျတာ မောငျရယျ လိုး လိုး အားရပါးရ လိုး”အား…… ကောငျးလိုကျတာမမရယျ မမလဲပွနျဆောငျ့ပေးနျော မမဖငျကွီးကအယျနတောပဲ အရမျးလိုးလိုးကောငျးတာပဲ”သူဇာလဲ ရဲဇျောပွောတဲ့အတိုငျး ဖငျကွီးဖွငျ့ပွနျကာ ဆောငျ့ဆောငျ့ ပေးလိုကျသညျ။
စောကျဖုတျထဲမှာလဲ သူဇာ့စောကျရညျတှကွေောငျ့ အသံမြိုးစုံထှကျနသေညျ။ ရဲဇျောအခနျးလေးမှာလဲ လူနှဈယောကျလိုးသံမြားနှငျ့ ဆူညံနသေညျ။ “မမ အပျေါကနေ တတျဆောငျ့ပေးပါလား မမနို့တှကေိုဆှပွီး ကိုငျခငျြလို့” “အတာဆို ပကျလကျလှနျလိုကျလမေောငျရဲ့ မမတတျဆောငျ့ပေးမှာပေါ့” ရဲဇျောလဲ ပကျလကျလှနျကာ လီးကိုကိုငျပွီး ထောငျပေးလိုကျသညျ။ သူဇာက ရဲဇျောပျေါသို့ခှကာ စောကျဖုတျနှငျ့လီးကိုတကေ့ာ ဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ ရဲဇျောက အပျေါကနဆေောငျ့ပေးနသေော သူဇာ့နို့တှကေိုဆှဲကာ သူဇာဆောငျ့ပေးသမြှကို ခံစားနသေညျ။
အား………. ကောငျးလိုကျတာမောငျရယျ အောကျကနပွေနျဆောငျ့ပေး မမပွီးတော့မယျ”ရဲဇျောကလဲ အောကျကနပွေီး ပငျ့ကာဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ ပွီးခါနီးသောကွောငျ့ စောကျရညျမြားပို၍ ထှကျလာသညျ။ သူဇာလဲ ရဲဇျောပျေါမှ ၁၅ ခကျြခနျ့ ဆောငျကာ ပွီးသှားတော့သညျ။ ရဲဇျောက သူဇာသှားပွီးသှားသျောလညျး အောကျကနဆေကျကာ ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ ထိုခြိနျတှငျသူဇာက ရဲဇျောပျေါသို့မှောကျကာ အမောဖွနေသေညျ။ ရဲဇျောက သူဇာ့နားကပျကာ လီးစုပျပေးရနျ ပွောလိုကျသညျ။ သူဇာကလဲထကာ စောကျရညျမြားနှငျ့ ပွောငျလကျနသေော ရဲဇျောလီးကွီးကို ကိုငျကာစုပျပေးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက သူဇာ့ခေါငျးကိုကိုငျကာ လီးကွီးကို အဆုံးထိထိုးကာ သူဇာ့အားခေါငျထဲတှငျ စိမျထားလိုကျသညျ။
သူဇာ့မကျြနာတဈခုလုံး နီရဲတတျလာသညျ။ ရဲဇျောကလဲ သူဇာ့အားခေါငျထဲတှငျ လရညျမြားကို ပွနျးထုပျလိုကျသညျ။ ရဲဇျောလရညျမြားသညျ အထိနျကှတျမရှိပဲ သူဇာ့ပါစပျထဲသို့ အကုနျထညျ့လိုကျတော့သညျ။ “သူဇာ ကိုတောငျးပနျပါတယျကှာ ကို့ကိုခှငျ့လှတျပါနျော” “ဟားဟား ရော့ သူဇာ့ဖုနျးကိုကွညျ့ပွီးမှ တောငျးပနျတာဆကျပွော” ကြျောထကျလဲ သူဇာ့ဖုနျးကိုယူကာ သူဇာပွသောပုံကိုကွညျ့လိုကျသညျ။ ကြျောထကျဖုနျးကိုကွညျကာ အရမျးအံသွသှားသညျ။ ဖုနျးထဲတှငျ သူဇာက ရဲဇျောရငျခှငျထဲတှငျ အဝတျစားမပါပဲ ဖကျကာအိပျ့နသေညျ။ ကြျောထကျလဲ နောကျပုံမြားကို ဆကျကာကွညျ့လိုကျသညျ။
နောကျပုံထဲတှငျ သူဇာက ရဲဇျောလီးကွီးကို တတျမကျစှာ စုပျပေးနသေညျ။ ရဲဇျောက သူဇာ့စောကျဖုတျယကျပေးနပေုံမြားကိုလဲ သခြောပီပွငျစှာရိုကျထားသညျ။ သူဇာရယျ လုပျရကျလိုကျတာကှာ” “ကိုအရငျလုပျခဲ့တာပါ သူဇာ့အပြိုစငျ့ဘဝက ကိုနဲ့မတနျလို့ သူမြားကိုပေးလိုကျတာ” “ဟုတျပါပွီသူဇာရယျ သူဇာကနြေပျတယျဆိုရငျ ကိုလဲကနြေပျပါတယျ” “ဟုတျပါပွီ သူဇာမနညေ့ထဲက ခုထိအိမျမပွနျရတေးဘူး အိမျပွနျပွီးရမေိုးခိုးခဲ့ဦးမယျ ပွီးမှတှတေ့ာပေါ့” “ဟငျ ဒါဆိုသူဇာက ရဲဇျောစီကနေ ခုမှပွနျလာတာပေါ့”။ “ဟုတျတယျလကေိုရဲ့ ရဲဇျောကအရမျးလုပျနိုငျတာပဲ တညလုံးဆကျတိုကျသူဇာ့ကို လုပျလိုကျတာ ပေါငျတောငျနဲနဲကှနတေယျ” “ဟုတျပါပွီသူဇာရယျ သူဇာအိမျပွနျမနနေဲ့တော့လေ အိမျပွနျရငျတခွားလူတှရေိပျ့မိနမေယျ ကိုနဲ့တူတူ ဟျောတယျမှာ သှားနားကွမလား”
“Ok လေ သှားကွတာပေါ့” သူဇာလဲ ကြျောထကျအပျေါ လှနျသှားသောကွောငျ့ ကြျောထကျအကွံကနု သိသျောလဲ ဟျောတယျကိုလိုကျရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ သူအကွိမျကွိမျရယူရနျ ကွိုးစားခဲ့သော သူဇာ့အပြိုစငျဘဝလေးကို လကျလှတျလိုကျရသောကွောငျ့ သူဇာ့အားငွိုးကာ ဟျောတယျချေါပွီး တဝကွီးလိုးရနျ ပွငျဆငျလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူနှငျ့သှားခဲ့သော ဟျောတယျသို့ ချေါသှားလိုကျသညျ။ ဟျောတယျသို့ရောကျသျော….. “ကို သူဇာရအေရငျခြိုလိုကျဦးမယျ ရဲဇျောတညလုံးပှကွမျးထားတာ ရတေောငျမဆေးရတေး” “သူဇာရယျကိုမဆောငျ့နိုငျတော့ဘူးကှာ လာပါခဈြကွရအောငျ” ကြျောထကျလဲ ရဲဇျောသူဇာ့လိုးတဲ့အကွောငျးကို ကွားနရေငျးကို ကာမစိတျတှေ တတျလာနသေညျ။
ဒီတဈခါတော့ သူဇာ့ပှဲကွမျးကာလိုးမညျဟု ကွိတျကာဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ ရဲဇျောတဈညလုံး လိုးထားသျောလဲ ကာမစိတျမြားက မပြောကျသှားပဲ တတျတတျလာသညျ။ သူဇာလဲအရမျးရှလာကာ ကြျောထကျဘောငျးဘီကို ခြှတျကာ တောငျနသေောလီးကွီးကို စုပျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလဲ သူဇာ့နှုတျခမျးလေးရဲ့ နှေးထှေးတဲ့အရသာကို မကျြလုံးကိုမှိတျကာ ခံစားနသေညျ။ သူဇာလဲ ကြျောထကျလီးကွီးကို ကိုငျကာ ဒဈဖူးလေးကိုငုံပွီး သခြောစုပျပေးလိုကျသညျ။ “အား……….. စုပျတတျလိုကျတာ သူဇာရယျ အရမျးကောငျးတယျကှာ” သူဇာလဲရဲဇျောလီးကွီးကို အဆုံးထိရောကျအောငျ စုပျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျလီးက ကွီးလှနျးသောကွောငျ့ သူဇာ့ပါစပျထပွညျ့ကာ လြှံထှကျနသေညျ။
အား………… ကောငျးလိုကျတာကှာ သူဇာ ကို့ဥတှရေောစုပျပေးကှာ” သူဇာလဲ ကြျောထကျပွောသလို ဥတှကေိုပါစုပျပေးလိုကျသညျ။ လကျကလဲ ကြျောထကျလီးကွီးကို ကိုငျကာ ထုပေးရငျး ဥတှကေိုပါစုပျပေးလိုကျသညျ။ “သူဇာရယျ… ကိုမနနေိုငျတော့ဘူးကှာ လိုးကွရအောငျနျော” သူဇာမကျတတျရပျလိုကျသညျနှငျ့ ကြျောထကျက သူဇာ့ကိုဆှဲလညျ့ကာ ကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ သူဇာ့ထဘီးကိုမကာ ပငျတီလေးကို အောကျနဲနဲလေးဆှဲခကြာ နောကျသို့ပွုးထှကျနသေော သူဇာ့စောကျဖုတျထဲသို့ လီးကွီးကိုထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ သူဇာစောကျဖုတျက စောကျရမြေားနှငျ့ ရဲဇျောလိုးထားသော လရညျမြားကွောငျ့ လီးကွီးက အဆငျပွခြေော့မှစှေ့ာ သူဇာ့စောကျဖုတျထဲ ဝငျသှားသညျ။
သူဇာလဲ လီးကွီးက ဆောငျ့ကာတိုးဝငျလာသောကွောငျ့ သူဇာတဈခကျြတှနျ့သှာသညျ။ ရဲဇျောလဲ သူဇာ့ခါးကိုကိုငျကာ နောကျမှတရကျဆကျ ဆောငျ့လိုးလိုသညျ။သူဇာလဲ ကြျောထကျဆောငျ့လိုးခကျြမြားကို မှယေ့ာခငျးမြားကိုစုတျကာ ခံနသေညျ။ ကြျောထကျက သူဇာ့ရဲ့ အပြိုစငျမဟုတျတော့တဲ့ စောကျဖုတျလေးကို တစကျမှမညှာပဲ ဆောငျ့ကာဆောငျကာ လိုးနသေညျ။ ကြျောထကျက သူဇာ့ကိုဆောငျ့လိုးနရေငျး သူဇာ့ဖငျကွီးကိုလဲ တဈဖကျတခကျြ ရိုကျကာလိုးနသေညျ။ “အား……… ကိုနဲနဲလြော့ပါဦး အား……..” “ရဲဇျောနဲ့တောငျ တညလုံးအလိုးခံလာတာပဲ သူဇာခံနိုငျမှာပါ” ကြျောထကျလဲ နဲနဲမောလာသောကွောငျ့ သူဇာ့ပျေါမှောကျကာလိုးရငျး သူဇာ့အကငြ်္ီမြားကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ သူဇာ့နို့လေးမြားကို လကျနှဈဖကျနှငျ့ခကြော ပှတျဆှဲပေးလိုကျသညျ။ သူဇာ့နို့လေးမြားသညျ ကြျောထကျခပြေေးမှုကွောငျ့ ရဲတတျလာသညျ။
သူဇာ့စောကျဖုတျမှာလဲ ရဲဇျောလိုးထားသောလရညျမြားနှငျ့ အသံမြိုးစုံ ထှကျနသေညျ။ “သူဇာ ကုတငျပျေါတတျပွီး မှောကျပေးနျော ကိုအပျေါကနေ တတျဆောငျ့ပေးမယျ” သူဇာလဲ ကြျောထကျပွောသညျနှငျ့ ထဘီနှငျ့ ပငျတီလေးကိုခြှတျကာ ကုတငျပျေါတတျပွီး မှောကျပေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ကြျောထကျက သူဇာ့ခါးအောငျတှငျ ခေါငျးအုနျးတဈခု ထိုးထညျ့ပေးလိုကျသညျ။ ထိုခြိနျတှငျ သူဇာ့စောကျဖုတျလေးသညျ ပေါငျတနျသှယျသှယျလေးကွားမှ ပွုးထှကျကာ ကြျောထကျလီးကွီးကို စောကျရညျတှစေိုရှဲကာ မြျောနသေညျ။ ကြျောထကျလဲ မှောကျပေးထားသော သူဇာ့ပျေါသို့ခှကာ သူဇာ့ပေါငျတနျသှယျသှယျလေးကွားမှ စောကျဖုတျလေးကို လီးကွီးဖွငျ့ထိုးကာ ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ။
ကြျောထကျလဲ သူဇာ့ပျေါမှောကျကာ စောငျ့လိုးနသေညျ။ သူဇာကလဲ ကြျောထကျလီးကွီး ဝငျထှကျကောငျးစရေနျ ဖငျကွီးကိုကေျာ့ကာ ကြျောထကျစောငျ့သမြှကို ခံနသေညျ။ “အား………… အား……….. ကောငျးလိုကျတာကိုရယျ ဆောငျ့လိုး သူဇာ့စောကျဖုတျကို ကှဲသှားအောငျဆောငျ့လိုးပေး” သူဇာလဲ ရမကျမြားထနျလာကာ ကြျောထကျကို စောငျ့လိုးရနျ တောငျးဆိုနသေညျ။ ကြျောထကျကလဲ လကျကိုထောကျပွီး သူဇာ့ဖငျကွီးတှေ တုနျခါနအေောငျ ဆောငျ့ကာဆောငျ့ကာ လိုးနလေိုကျသညျ။ “ကောငျးလိုကျတာသူဇာရယျ မငျးစောကျဖုတျက ရဲဇျောလိုးပွီးတာတောငျ အရမျးကောငျးတယျကှာ ” “သူဇာ့စောကျဖုတျကို ကွိုကျလားဟငျ” “ကွိုကျတာပေါ့ကှ သူဇာ့စောကျဖုတျကွီးကို အရငျထဲကလိုးခငျြနတော မငျးစောကျဖုတျကွီးက အရမျးညှဈတာကှာ”
“အတာဆို အမွဲတမျးလိုးနျော” “အား……….. အား………….. သူဇာပွီးတော့မယျကိုရယျ မွနျမွနျလေးဆောငျ့လိုးပေး” ကြျောထကျလဲ သူဇာ့စောကျဖုတျကွီးကို အားပွငျးပွငျးဖွငျ့ ဆောငျ့ကာ အခကျြမြားမြားလိုးပေးလိုကျသညျ။ သူဇာလဲ ဖငျကွီးကိုကော့ကာ တဆကျဆကျတုနျရငျး ပွီးသှားသညျ။ ကြျောထကျလဲ သူဇာ့စောကျဖုတျထဲက ညှဈအားကွောငျ့ သူဇာနှငျ့အတူတူပွီးသှားသညျ။ ထိုနကေ့ သူဇာနှငျ့ကြျောထကျတို့နှဈယောကျ ဟျောတယျတှငျ အခြိနျကုနျခဲ့သညျ။ နောကျနှဈရကျလောကျထိ သူဇာလမျးပငျမလြောကျနိုငျပဲ အိမျတှငျးအောငျးနခေဲ့ရသညျ။
“အား…….အား…… ကောငျးလိုကျတဲ့ဖငျကွီးကှာ ကိုကြျောထကျက ဘယျနှခြီတောငျ လိုးလိုကျတာလဲဟငျ” “တဈနကေုနျလိုးတာမောငျရဲ့ ခိုငျမှာဖငျတှကေို ကြိနျးနတောပဲ” “ကိုကြျောထကျနဲ့ခံရတာ ကောငျးလားခိုငျ” “အရမျးကောငျးတာပေါ့ ကိုကြျောထကျလီးကွီးက မောငျ့ထကျရှညျတယျ” “အား………. အား……….. မောငျ ဖငျလိုးရငျး ဖုတျကိုပှတျပေး ခိုငျ့ဖုတျကွီးယားလာပွီ ပွီးတော့မယျ” “မောငျလဲပွီးတော့မယျကှာခိုငျသူနှငျ့ရဲဇျောလဲ အပွိုငျဆောငျ့ကွရငျး ပွိုငျတူပွီးသှားကွသညျ။ ရဲဇျောတိုကျခနျးလေးထဲတှငျ ခိုငျသူတို့အခဈြပှဲ ပွီးကာ နှဈယောကျသားဖကျကာ အမောဖွနေကွေသညျ။ ခိုငျသူဖောကျပွနျပွီးသညျ့နောကျတှငျ ရဲဇျောစိတျထဲတှငျ ခိုငျ့သူကို တခွားတဈယောကျလိုးသညျကို သဘောကွလာသညျ။
နောကျပိုငျးတှငျ ခိုငျသူ့ကို ကြျောထကျနှငျ့လိုးသော အကွောငျးမြားကို မေးကာလိုးရသညျကို နှဈသကျလာတော့သညျ။ ကြျောထကျစိတျထဲတှငျ ခိုငျသူ့ကို နှဈယောကျပေါငျးကာ လိုးခငျြသညျ့စိတျမြား တိုးလို့လာနသေညျ။ ခုဆို ခိုငျသူလဲ ကြျောထကျနှငျ့လိုးသညျမြားကို ပွောရသညျမှာ ရဲလာပွီးဖွဈသညျ။ ရဲဇျောဒီနတှေ့ငျတော့ သူဖွဈခွငျသညျမြားကို အကောငျထညျဖျောရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။ “ခိုငျ မောငျခိုငျ့ကိုပွောစရာရှိတယျ” “ပွောလမေောငျရဲ့ ဘာကိစ်စလဲ” “ဒီလိုလေ မောငျခိုငျ့ကို ကာမအရသာသဈခံစားစခေငျြလို့ နောကျပွီး မောငျလဲခံစားကွညျ့ခငျြလို့” “ဟငျ မောငျကခိုငျ့ကို ဘယျလိုလုပျခငျြလို့လဲ ပွောကွညျ့လေ”။
“ဒီလိုကှာ ခိုငျ့ကို မောငျနဲ့တခွားတဈယောကျနဲ့ နှဈယောကျညှပျပွီး လိုးကွညျ့ခငျြတယျ” “ဟာမောငျကလဲ မဖွဈနိုငျတာ ဘာလဲ မောငျကဖောကျပွနျခငျြလို့ ခိုငျ့ကိုရမယျရှာနတောလား ” “မဟုတျပါဘူးခိုငျရယျ အခဈြကအခဈြလေ ခုဟာက ဆကျစီမှာ မောငျတို့နှဈယောကျတူတူ ပြျောခငျြလို့ မောငျကခိုငျကိုပဲခဈြတာပါဗြ ကြောငျးပွီးတာနဲ့ မောငျကခိုငျ့ကိုလကျထပျမှာပါ” “အတာဆိုဘာလို့လဲ ခိုငျ့ကိုဘယျသူ့ကိုပေးလုပျမလို့လဲ မောငျရကျစကျတယျကှာ ခိုငျ့ကိုတနျဖိုးမထားဘူး” “ဟာမဟုတျရပါဘူးခိုငျရယျ ခုဟာက ခိုငျအဆငျပွမှေပါ နောကျပွီးခိုငျနဲ့ အဆငျပွတေဲ့လူနဲ့မှပါ မောငျ့စိတျထဲမှာ ခိုငျနဲ့တခွားတဈယောကျနဲ့ လိုးတာကို ဖီးလျ ဖွဈလို့ပါ”
“မောငျမမှတျတေးဘူးလား မောငျကိုလကျစားခပြွေီး ခိုငျ့ဖငျကို သူမြားပါကငျဖှငျ့ခံလိုကျတာလေ မောငျထကျဖွဈခငျြရငျလုပျလိုကျလေ” “ဟာရဲဇျောရာ မငျးတကယျဟုတျလို့လား” “ဟုတျပါတယျကိုကြျောထကျရယျ ကိုကြျောထကျကရော ဖွဈရဲ့လား” “ဟ မငျးခှငျ့ပွုတယျဆို ငါကတော့ဖွဈပါတယျ ဒါပမေဲ့ သူဇာစိတျဆိုးမယျထငျတယျ” “အတာဆိုကိုကြျောထကျက အဆငျမပွဘေူးလား” “ဟာမငျးကလဲ လုပျမှာပေါ့ သူဇာ့ကိုပွီးမှခြော့လိုကျမယျ” ရဲဇျောက ကြျောထကျကို ခိုငျသူအား နှဈယောကျဝိုငျးညှပျ့ခရြနျ ပွောလိုကျသညျ။ ကြျောထကျကို ခိုငျသူတောငျဆိုခဲ့တာဖွဈသညျ ။ ခိုငျသူ့အတှေးမှာ ရဲဇျောက ကြျောထကျကိုစိတျနာကာ ကြျောထကျနှငျ့တော့ သူမအားမလုပျဟုတှေးကာ ပွောလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
တကယျတော့ရဲဇျောအတှေးထဲက ခိုငျသူ့ကိုဝိုငျးခရြနျ တှေးထားသော လူကလဲ ကြျောထကျပငျဖွဈသညျ။ “တူ……. တူ……… ဟယျလို မောငျ” “ခိုငျ မောငျတို့ဟိုကိစ်စအဆငျပွတေယျ ကိုကြျောထကျက လကျခံတယျကှ မနကျဖွနျ မောငျ့တိုကျခနျးကို လာခဲ့နျော” “ဟာ မောငျတကယျကွီးလား မောငျကကိုကြျောထကျနဲ့ခိုငျကို တကယျပေးနမှောလား” “တကယျပေးနမှောပေါ့ ခိုငျပဲကိုကြျောထကျဆို လကျခံတယျဆို” “ခိုငျက ဒီတိုငျးပဲပွောလိုကျတာ” “မရတော့ဘူးနျောခိုငျ မောငျကအကုနျစီစဉျပွီးပွီ” “အငျးပါ ဒါပမေဲ့ မနကျဖွနျစနနေကွေီ့းလမေောငျ ” “သိတယျလခေိုငျရဲ့ ကြောငျးပိတျမှ မမသူဇာမပါမှာပေါ့ကှ ဟုတျဘူးလား” “…….” ။စနနေေ့။ ခိုငျသူတဈယောကျ မနကျအစောကွီးထဲကထကာ အလှတှပွေငျနသေညျ။
အဝတျစားမြားကိုလဲ ဆကျစီဖဈတာမြားကို ရှေးကာဝတျဆငျနသေညျ။ ခိုငျသူ့စိတျထဲတှငျ ကြျောထကျနှငျ့ရဲဇျော နှဈယောကျညှပျခမြညျကိုတှေးရငျး ရငျတှခေုနျနသေညျ။ တကယျတော့ခိုငျသူသညျ ကြျောကကို ကွိတျကွှနေသေညျ ။ နောကျပွီး ကြျောထကျရဲ့ အလိုးကြှမျးကငျြမှုမြားကိုလဲ ခိုငျသူတဈယောကျ စှဲလမျးနပွေီဖွဈသညျ။ ခိုငျသူတဈယောကျ သူငယျခငျြးမြားနှငျ့ ပြျောပှဲစားဟုပွောကာ အိမျမှ မနကျ၉နာရီလောကျတှငျ ထှကျလာခဲ့သညျ။ ခိုငျသူသညျ အပေါငျးသငျးပေါမြားသူမို့ မိဘမြားကယုံကွညျ့သညျ။ မယုံကွညျတာကတော့ သူဇာတဈယောကျပငျဖွဈသညျ။
သို့သျောလဲ ရဲဇျောနှငျ့ ခြိနျးထားသညျဟုထငျကာ ဒီတိုငျးပဲလှတျလိုကျသညျ။ ဒေါကျ…. ဒေါကျ.. ဒေါကျ…. ခိုငျသူတံခါးခေါကျလိုကျတယျဆိုရငျပဲ ရဲဇျောတံခါးကို အမွနျလာဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ စားသောကျစကာမြားဝယျရမညျမို့ ခိုငျသူ့ကိုတဈယောကျထဲထားခဲ့ကာ shopping center သို့ထှကျခဲ့လိုကျသညျ။ ခိုငျသူက အခနျးထဲတှငျ ကြျောထကျအလာကို တဈယောကျထဲ ဆောငျ့နသေညျ။ ရဲဇျောထှကျသှားပွီး ခဏအကွာတှငျ ကြျောထကျရောကျလာသညျ။ ခိုငျသူနှငျ့ကြျောထကျက ရငျးနှီးထားသူမြားပီပီ ခိုငျသူက ကြျောထကျကိုဖကျကာ အနမျးမြားပေးရငျး စီးကွိုလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက ခိုငျသူနှငျ့ကြျောထကျအား ဧညျခံရနျ ပစ်စညျးမြားကို ပွညျ့စုံအောငျဝယျနသေညျ။
ခိုငျသူ့အတှကျဝိုငျနှငျ့ သူတို့နှဈယောကျအတှကျ အရကျပွငျးပွငျးကို ရှေးကာဝယျခဲ့သညျ။ ထိုနောကျ နဲနဲအပြော့သောကျရနျ ဘီယာပုလငျးမြားလဲ ဆှဲခဲ့လိုကျသညျ။ ရဲဇျောတိုကျခနျးပွနျရောကျတော့ ၁၀နာရီပငျ ကြျောနပွေီဖွဈသညျ။ ရဲဇျောလဲ အထဲကနှဈယောကျ ဘာလုပျနမေလဲသိခငျြတာနဲ့ သော့ပိုတဈခြောငျးနဲ့ ဖှငျ့ကာ အိမျထဲသို့ဝငျခဲ့လိုကျသညျ။ “အား….. အား……….” ထိုအသံကိုကွားလိုကျခြိနျတှငျ ရဲဇျောအံသွသှားသညျ။ ရဲဇျောစိတျထဲတှငျ ထိုခွနေလေောကျထိ ရောကျနလေိမျ့မညျဟု့ တှေးမထားခဲ့သညျမှာ အမှနျပငျဖွဈသညျ။ ထိုအသံမြားကိုကွားသညျနှငျ့ ရဲဇျောရဲ့ ကားမစိတျမြားလဲ ကွှကာလာခဲ့သညျ။
ထိုကွောငျ့ ရဲဇျောသညျ ဝယျလာသောပစ်စညျးမြားကို စားပှဲပျေါတှငျခကြာ အသံလာရာကို သှားလိုကျသညျ။ အသံလာရာ အခနျးထဲတှငျ……အသံလာရာမှာ အခနျးထဲမှဖွဈသောကွောငျ့ ရဲဇျောလဲ အသံလာရာအခနျးထဲကို ဟနသေောတခါးမှ ကွညျ့လိုကျသညျ။ အခနျးထဲတှငျ ခိုငျသူက သူဝတျလာသော ဘောငျဘီအတိုလေးကို ပေါငျလယျလောကျထိခြှတျထားသညျ။ အပျေါပိုငျးမှာလဲ အကငြ်္ီအကွပျလေးကို နို့မြားပျေါအောငျလှနျပေးထားသညျ။ ကြျောထကျကလဲ ဂငျြးဘောငျဘီကို ခွသေလုံးထိခြှတျထားသညျ။ ခိုငျသူက ကြျောထကျလိုးရတာ အဆငျပွစေရေငျ ကုတငျပျေါသို့လကျထောကျကာ ကုနျးပေးထားသညျ။
ကြျောထကျကလဲ ခိုငျသူ့နောကျမှ ခါးလေးကိုငျကာ အားပွငျးပွငျးနဲ့ တဈခကျြခငျြး ဆောငျ့ကာလိုးပေးနသေညျ။ ရဲဇျောလဲ သူတို့နှဈယောကျကိုကွညျ့ကာ လီးမှာတငျးကာတောငျလာသညျ။ ရဲဇျောက သူ့ခဈြသူ ခိုငျသူအလိုးခံတာကိုကွညျ့ရငျး ကာမရမကျမြားတိုးကာလာသညျ။ ထိုကွောငျ့ ဘောငျဘီ ခါးပတျကိုဖွုတျကာ ဘောငျဘီကို လီးပျေါရုံခြှတျလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ လီးကွီးကိုကိုငျကာ ခိုငျသူတို့လိုးနတောကိုကွညျ့ရငျး တခါးပေါကျတှငျရပျကာ ဂှငျးထုနလေိုကျသညျ။ “ကိုကို ဆောငျ့ပေး အရမျးကောငျးတယျ ဆောငျ့လိုးပေး” “လိုးပေးမှာပေါ့ခိုငျရဲ့ ဖုတျလေးကအရမျးကောငျးတယျကှာ” ရဲဇျောလဲ အခနျးထဲမှနှဈယောကျ စကားမြားကွားကာ လီးမှအလှနျတောငျလာသောကွောငျ့ ခကျသှကျသှကျလေး ထု့နလေိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျဆောငျ့ပေးတာကို အားမရပဲ ဖငျကွီးကိုနောကျပွဈကာ ဆောငျ့ဆောငျ့ပေးနသေညျ။
“ခိုငျသူ လကျလေးနဲ့ အစိလေးကို ပှတျကစားပါလား” “ဟုတျကိုကို ခိူငျသူ့ဖုတျထဲက အရညျတှအေရမျးထှကျနပွေီ” “အရညျတှစေိုလာရငျ ပိုကောငျးတာပေါ့ ခိုငျသူရဲ့” ရဲဇျောလဲ ခိုငျသူတို့လိုးပှဲကို မမှိတျမသုနျးကွညျ့နသေည။ျ လကျကလီးကွီးကလဲ ခုတော့မှရမကျတှထေနျကာ အရငျကထကျပငျ ပိုကွီးနသေညျ။ ရဲဇျောကွညျ့နစေဉျမှာပဲ ကြျောထကျက ဆောငျ့တာကိုရပျပွီး လီးကိုဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ ထိုနောကျခဏအကွာတှငျ လီးကွီးကိုတဖွညျးဖွညျးပွနျသှငျးကာ ညှောငျ့လိုးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲ အံလေးကွိတျကာ ကြျောထကျလိုးသမြှကို ခံနသေညျ။ “ခိုငျသူ မငျးဖုတျထဲကို မငျးလကျနှဈခြောငျးထညျ့ပွီး ဆှနနေျော ဒါမှရဲဇျောပွနျလာရငျ ခံစားရမဲ့အရသာကိုသိမှာ အားရမျးကောငျးတာပဲကိုကိုရယျ ကို့လီးကွီးက အရမျးစှဲစတောပဲ ခိုငျသူတော့ အမွဲပဲလိုးခံခငျြတော့တာ” ထိုခြိနျမှ ရဲဇျောလဲ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့ကိညုး ဖငျလိုးနပွေီဆိုတာ သိလိုကျရသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ခိုငျသူ့အျောသံမြားသညျ ရငျခေါငျးသံပေါကျနခွေငျးဖွဈသညျ။ ရဲဇျောလဲ ထိုးနှဈယောကျလိုးနတော ကွညျ့ရငျး လီးကွီးကိုကိုငျကာ ဆကျတိုကျမွနျမွနျ ထုခလြိုကျတော့သညျ။ ရဲဇျောလီးထိပျ့မှ လရညျမြား ကွမျးပွငျပျေါသို့ ကသြှားတော့သညျ။ အခနျးထဲမှ ကာမသားကောငျနှဈဦးလဲ အရှိနျတှမွေငျ့ကာ ခဏအကွာတှငျ ပွီးသှားကွသညျ။ သူတို့ပွီးသှားမှ အခနျးဝက ရဲဇျောကိုတှလေို့ကျကွသညျ။ “ဟာ ရဲဇျော” “ဟငျ မောငျ” “မောငျဘယျခြိနျထဲက ရောကျနတောလဲဟငျ” “ငါတို့နှဈယောကျလဲ ဘယျလိုမှမထိနျးနိုငျလို့ မငျးကိုမစောငျ့ပဲ လိုးလိုကွတာ”။
“မောငျစိတျဆိုးနပွေီလားဟငျ” “စိတျမဆိုးပါဘူးခိုငျရဲ့ ခိုငျတို့လိုးနတောကိုကွညျ့ပွီး မောငျလဲဖီးလျအရမျးတတျလို့ ထုလိုကျတာ ခိုငျတို့ရှလေ့ေးတငျပွီးသှားတာ” “ရဲဇျော sorryပဲကှာ ငါမငျးကိုမစောငျ့လိုကျမဘူး” “ဟာ မလိုပါဘူးကိုကြျောထကျရယျ ခုလိုဆိုတော့ ပိုတောငျကောငျးသေး” ထို့နောကျ ရဲဇျော ကြျောထကျနှငျ့ ခိုငျသူတို့လဲ စားကွသောကျကွသညျ။ ပထမပိုငျးတှငျ ရဲဇျောနဲ့ခိုငျသူက တတှဲထိုငျနသေညျ။ ကြျောထကျကတော့ သူတို့နဲ့မကျြနာခငျြးဆိုငျတှငျ ထိုငျကာ ရဲဇျောဝယျလာသော အရကျပွငျးပွငျးကို ဇိမျခံကာ သောကျနသေညျ။ ခိုငျသူကတော့ ဝိုငျတငျအားမရပဲ ဘီယာမြားကိုပါ ရောသောကျနသေညျ။
ခိုငျသူလဲ မကျြနာမြားနီရဲကာ မူးလာသညျ။ “ကိုကြျောထကျ ခိုငျသူ့ဘေးလာထိုငျလေ ဒီမှာအကယျြကွီး ရှိတေးပါတယျ” ခိုငျသူလဲမူးကာ ကြျောထကျကို သူမဘေးတှငျလာထိုငျရနျ ချေါလိုကျသညျ။ ရဲဇျောနှငျ့ ကြျောထကျတို့လဲ မှနျလာကွသညျ။ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူဘေးတှငျ ဝငျထိုငျလိုကျသညျ။ ခိုငျသူက ရဲဇျောနှငျ့ ကြျောထကျ နှဈယောကျကို တဈယောကျတလှညျ့ အရကျတိုကျလိုကျသညျ။ထို့နောကျ ရဲဇျောက ခိုငျသူ့ပေါငျလေးမှစကိုငျကာ ဘောငျးဘီပျောမှ ဖုတျလေးကိုပှတျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျကတော ခိုငျသူ့နို့လေးမြာကို ဖျောကာ စို့နသေညျ။ ခိုငျသူလဲ ရဲဇျောခါးပတျကိုခြှတျကာ ဘောငျဘီထဲမှ လီးကွီးကိုထုတျကာ ထုပေးနလေိုကျသညျ။ကြျောထကျက ခိုငျသူ့အကငြ်္ီလေးနှငျ့ ဘျောလီလေးကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။
ခိုငျသူလဲ မကျတျရပျကာ ဘောငျးဘီးလေးကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ ရဲဇျောလဲ ခိုငျသူ့ပငျတီလေးကို သူကိုယျတိုငျခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူပွနျထိုငျလိုကျခြိနျတှငျ ရဲဇျောက ခိုငျသူ့ဖုတျလေးကို နှုတျခမျးနှငျ့တကေ့ာ ဂြာပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူလဲ ရဲဇျောခေါငျးကိုကိုငျကာ စောကျဖုတျလေးအားနမျးသမြှကို ခံစားနသေညျ။ ထိုခြိနျတှငျ ကြျောထကျက အဝတျစားမြားကိုခြှတျကာ ခိုငျသူ့နှုတျခမျးသို့ သူ့လီးကွီးထိုးပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျလီးကွီးကို အလိုကျသိစှာ စုပျပေးလိုကျသညျ။ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့ခေါငျးကိုကိုငျကာ လီးကွီးကို ဆောငျ့ကာဆောငျ့ကာ ထိုးထညျ့လိုကျသညျ။
ရဲဇျောကလဲ ခိုငျသူ့စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားမြားကို စှဲစုပျကာ စိလေးကိုယကျရငျ ဂြာပေးနလေိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ပါစပျမှလီးကိုစုပျရငျး စောကျဖုတျယကျခံရသညျကို အရမျးကွိုကျနပွေီး ဖွဈသညျ။ ခိုငျသူလဲ စောကျဖုတျထဲမှ အရမျးယားကာ ကာမရမကျမြားထနျလာသညျ။ “ခိုငျ မောငျ့ကိုကုနျးပေးနျော မောငျခိုငျ့ဖငျကို လိုးပေးမယျ” ခိုငျသူလဲ ရဲဇျောပွောသညျ့အတိုငျး ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက စောစောက ကြောကျထကျလိုးထားသော ခိုငျသူ့ဖငျလေးကို စစခငျြးထဲက ဆောငျကာလိုးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူ့ဖငျထဲတှငျ ကြျောထကျလရညျမြားက ရှိနသေေးသောကွောငျ့ ရဲဇျောလီးကွီးမှာ ခြော့မှစှေ့ာဝငျသှားသညျ။ စစခငျြးမှာ ဆောငျ့သှငျးခံလိုကျရသောကွောငျ့ ခိုငျသူတဈခကျြတှနျ့ကာ သှားသညျ။
ပါစပျမှအျောလိုကျသျောလဲ ကြျောထကျလီးကွီးကိုစုပျရကျနှငျ့မို့ အသံမထှကျလိုကျပေ။ ရဲဇျောက နောကျမှ ခိုငျသူ့ဖငျကို ဆောငျ့လိုးသလို ကြျောထကျကလဲ ခိုငျသူပါစပျကို ဆောငျ့ကာဆောငျကာ လိုးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူ့ပါးစပျထဲတှငျ ကြျောထကျလီးကွီးက ပွညျ့သိပျ့ကာ လညျခြောငျးထဲထိရောကျရောကျသှားသညျ။ နောကျမှလဲ ရဲဇျောဆောငျ့ကာ ပွနျထုတျလိုကျတိုငျး ခိုငျ့သူစအိုသားမြားပါ ကပျကာကပျကာ ပါပါလာသညျ။ “ကိုကို ထိုငျလိုကျပါလား ခိုငျသူအပျေါကနေ တတျဆောငျ့ပေးမယျ” ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူပွောသညျ့အတိုငျးထိုငျကာ တောငျနသေောလီးကွီးကို လိုငျကာ စောငျ့နလေိုကျသညျ။ ထိုခြိနျမှ ရဲဇျောကလဲ ဖငျထဲမှ လီးကွီးကိုခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ခိုငျသူက ကြျောထကျပျေါတတျကာ စောကျဖုတျထဲသို့ ကြျောထကျလီးကွီးကို ကိုငျကာထညျ့ပေးရငျး ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ရဲဇျောက နောကျမှနပွေီး လီးကွီးကိုကိုငျကာ ထုရငျးကွညျ့နလေိုကျသညျ။
ခိုငျသူကလဲ ကြျောထကျပျေါတှငျ အားပွငျးပွငျးနှငျ့ဆောငျကာ လိုးနသေညျ။ ကြျောထကျက ခိုငျသူ့အိုးကွီးကိုကိုငျကာ ခိုငျသူ့နှုတျခမျးအားနမျးနသေညျ။ရဲဇေျာ့ တိုကျခနျးလေးထဲတှငျ ကြျောထကျနှငျ့ ခိုငျသူတို့ လိုးသံမြား ဆူညံနသေညျ။ ရဲဇျောလဲ ခိုငျသူ၏ တဏှာရမကျမြားပွငျးပွငျးနှငျ့ ဆောငျ့လိုးနမှေုမြားကို ကွညျ့ရငျး ရမကျစိတျမြားပိုပိုဖွဈပျေါလာသညျ။ ခဏအကွာတှငျရဲဇျောက ခိုငျသူ့ခါးကိုထိနျးကိုငျလိုကျကာ ခိုငျသူ့ဖငျထဲသို့ လီးကွီးကိုထိုးစိုကျကာ လိုးလိုကျသညျ။ ဒီတခါတှငျတော့ ခိုငျသူတဈယောကျ ကြျောထကျနှငျ့ နှုတျခမျးခွငျးဂဟဆေကျကာ မနမျးနိုငျတော့ပေ။
အား…….. အား……. “မောငျ ဖွေးဖွေး လီးကွီးနှဈခြောငျးဝငျနတော ဘယျလိုကွီးလဲမသိဘူးကှာ” ကြျောထကျကလဲ ရဲဇျောလီးကွီး ကောငျးကောငျးဝငျလာနိုငျစရေနျ ခိုငျသူဖငျကွီးကို ဖွဲပေးထားလိုကျသညျ။ ခိုငျသူသညျ ခုမှလီးနှဈခြောငျစခံတာမို့ လီးနှဈခြောငျးဒကျကို ကောငျးကောငျးခံနရေသညျ။ ကြျောထကျနဲ့ ရဲဇျောကလဲ လီးကွီးမြားကို အဆုံးထိထညျ့ကာ ဖိပွီးကပျညှောငျ့နကွေသညျ။ ခဏအကွာတှငျ ခိုငျသူလဲ ငွိမျသှားကာ လီးနှဈခြောငျဒဏျကို ခံနိုငျလာသညျ။ ခိုငျသူခံနိုငျလာတာကိုသိသော ရဲဇျောနဲ့ကထျောထကျကလဲ စညျးခကျြညီညီ နှဈယောကျသား ဆောငျ့ကာလိုးလိုကျကွသညျ။ ခိုငျသူကလဲ လီးနှဈခြောငျအရသာကိုသိကာ အားမရနိုငျတော့ပဲ အလညျမှနပွေီး လီးနှဈခြောငျကိုပွနျကာ ဆောငျ့နသေညျ။သုံးယောကျသား အခနျးထဲတှငျ အသံမြိုးစုံထှကျအောငျ လိုးနကွေသညျ။ ဆကျတိုကျဆောငျကာ လိုးနကွေသောကွောငျ့ မောလာကွသညျ။
ခဏဖိကပျကာ ညှောငျ့လိုးကွပွီး ပုံစံပွောငျးလိုကျသညျ။ ရဲဇျောက မကျတတျရပျပွီ ခိုငျသူနဲ့မကျြနာခငျြးဆိုငျနကော ခိုငျသူ့ပေါငျကိုမလိုကျပွီး လီးကွီးကိုထညျ့လိုကျသညျ။ ခိုငျသူကလဲ ရဲဇျောလညျပငျးကိုသိုငျးဖကျပွီး နှုတျခမျးကိုနမျးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ကြျောထကျက နောကျမှနေ၍ ခိုငျသူ့ဖငျထဲကို လီးကွီးထညျ့ကာ ခပျစပျစပျလေး ဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။ ကြျောထကျက ဖငျလိုးနရေငျး ခိုငျသူ့နို့လေးမြားကို နောကျမှနိုကျကာ လိုးနလေိုကျသညျ။ ရဲဇျောနဲ့ ကြျောထကျလဲ ခိုငျသူ့ကို အပွိုငျဆောငျ့ကာ လိုးလိုကျသညျ။ ဆောငျ့ကာလိုးနရေငျး ခဏအကွာတှငျ သုံးယောကျသား အားပွငျးပွငျးနှငျ့ဆောငျ့ကာ ပွိုငျတူပွီးသှားကွသညျ။ ထိုနတှေ့ငျ ခိုငျသူ ညနကျမှ အိမျပွနျကာ သုံးသောကျသား တဈနကေုနျ လိုးဆျောခဲ့ကွလတေော့သညျ …….. ပွီးပါပွီ။
ကျော်ထက်တစ်ယောက် သူဇာ နဲ့ ခိုင်သူ ညီမနှစ်ယောက်အလာကို ကျောင်းစာကြည့်တိုက်အရှေ့မှ စောင့်နေသည်။ ကျော်ထက်သည် ထိုညီမနှစ်ယောက်ထဲမှ အကြီးဖြစ်သူ သူဇာကိုချစ်ခွင့်ပန်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဇာသည် ကျောင်းတွင်း Missပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဇာသည် ယောက်ျားလေးတိုင်း ငေးရသောသူ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သူဇာသည် အရမ်းလှသလောက်အရမ်းမာနကြီးသူ တစ်ယောက်လဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသူတစ်ယောက်ကိုမှ ကျော်ထက်ဆိုသည့် ကောင်လေးက အရမ်းစွဲလမ်းကာ ချစ်မိနေတော့သည်။ ကျော်ထက်စောင့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ သူဇာ သည် ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့ အတွဲဘေးမှလမ်းလျောက်ကာ လာနေသည်။
ကျော်ထက်လဲ သူဇာနားသို့အပြေသွားကာ ပြုံးပြပြီးသူဇာဘေးမှကပ်လိုက်လာသည်။ “သူဇာ ကျွန်တော်သူဇာနဲ့ စကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်တယ် ခွင့်ပြုပါလားဟင်” “ကျမရှင်နဲ့ပြောစရာ စကားမရှိဘူး ရှင်ကျမကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ကျမစာကြည့်တိုက်ထဲမှာ စာဖက်စရာရှိတေးတယ် ကျမ မအားဘူး” “ဟာမမကလဲ ကိုကျော်ထက်ကိုအားနာစရာကြီး မမလဲတစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ရမှာကို ကိုကျော်ထက်ရှိတော့ အဖော်ရတာပေါ့မမကလဲ” “ဟုတ်သားပဲ မသူဇာကလဲ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဒီနေ့လျောက်လည်မှာလေ မမအဖော်မရှိပဲနေမှာပေါ့” “နင်တို့နော် နင်တို့သွားချင်တိုင်း ငါ့ကိုထိုးထည့်နေတယ်” “မမကလဲ မာယာများမနေနဲ့နော် သိပြီးသား ကိုကျော်ထက် မမကိုအပ့်ခဲ့တယ်နော် အဟိ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတော့ ညီမတို့ကတော့သွားပြီ” ပြောပြီးသည်နှင့် ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့နှစ်ယောက် သူဇာ့ကိုထားကာ ပြေးထွက်သွားကြသည်။
ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့နားကပ် ချစ်ခွင့်ပန်ကာ အဖြေတောင်းပြီး စကားပြောရင်း ကျန်နေရစ်ခဲ့သည်။ “တော်တော်ဆိုးတဲ့သူတွေ သူများကိုပစ်ထားခဲ့တယ် ပြန်လာမှတွေ့ဦးမယ်” “သူဇာကလဲ ကိုတစ်ယောက်လုံးရှိပါတေးတယ်ကွာ ကိုကသူဇာနားမှာ အမြဲရှိနေပေးမှာ” “ဟွင့် ရှင့်ကိုဘယ်သူကလိုအပ့်တယ်ပြောလို့လဲ လာလာချည်သေးတယ်” “သူဇာမလိုအပ့်လဲ ကိုကတော့သူဇာ့နားမှာ အမြဲရှိပြီး အမြဲချစ်နေမှာဗျ” “ဟားဟား တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား စောင့်ကြည့်မယ်လေ” “ကြည့်စေဗျာ ကိုကအမြဲရှိနေမှာ စိတ်ချနော်” ရဲဇော်နှင့်ခိုင်သူတို့သည် ကျောင်းထဲမှထွက်ကာ နေရာတစ်ခုကိုဦးတည်သွားနေကြသည်။
ထိုနေရာကတော့ ရဲဇော်နေသောတိုက်ခန်းလေးပင် ဖြစ်သည်။ ရဲဇော်နှင့်ခိုင်သူတို့မှာ ချစ်သက်တမ်းခြောက်လကျော် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ရဲဇော်၏ စွဲဆောင်မှုကောင်းသောကြောင့် ချစ်သူဖြစ်ပြီး သုံးလအကြာတွင် ခိုင်သူ့အပျိုစင်ဘဝလေးကို ရဲဇော်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်သည်။ ခိုင်သူသည်chem major ရဲ့ Queen တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ခိုင်သူကတော့ လူတိုင်းနှင့် ဖော်ဖော်ရွေရွေဆက်ဆံတတ်သည်။ လူချစ်လူခင်လည်းများသည် ခိုင်သူ့ကိုလိုက်သည့်လူများလဲ အလွန်များသည်။ ထိုထဲမှ ခိုင်သူ့ကိုစွဲဆောင်နိုင်သော ရဲဇော်ကိုအဖြေပြန်ပေးကာ ချစ်သူအဖြစ်တွဲခဲ့ကြသည်။ ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့သည် တိုက်ခန်းလေးပေါ်သို့တတ်လာကြသည်။ “မောင် မမကအရမ်းမူတာပဲနော် ခိုင်ဆိုရင်မနေနိုင်ဘူး ခဏလေးနဲ့အဖြေပြန်ပေးလိုက်မိမှာ”။
“ဟုတ်တယ်နော်ခိုင် မသူဇာက ချစ်နေတာကိုအရမ်းနေနိုင်တယ်” “ဟုတ်တယ် ကိုကျော်ထက်ကို သနားပါတယ်နော်” “ဟင့်အင်း မောင်ကတော့ ကိုကျော်ထက်ကို အားကျတယ်” “ဟင် ဘာလို့လဲမောင်ရဲ့” “ဟုတ်တယ်လေ မမကအရမ်းလှတယ် ကိုကျော်ထက်က မမအချစ်ကိုရမှာသေချာတယ်လေ မမကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေ ဟုတ်ဘူးလား” “မောင်နော် သူများမမကိုပြစ်မှားနေတယ် ဘာလဲခိုင့်ကိုချစ်ရတာ ရိုးသွားပြီလား” “မဟုတ်ပါဘူးခိုင်လေးရယ် မောင်ကခိုင်းလေးကိုပဲအမြဲချစ်ချင်တာ လာ သက်သေပြမယ်” ရဲဇော်သည် အခန်းသော့ကိုဖွင့်ပြီး ခိုင်သူကိုအထဲသွင်းကာ နှုတ်ခမ်းများကိုနမ်းစုပ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်လည်ပင်းကိုဖက်ကာ အနမ်းကြမ်းများဖြင့် ပြန်တုန့်ပြန်နမ်းလိုက်သည်။
ရဲဇော်က ခိုင်သူ၏တင်သားများကို စုပ်ကိုင်ကာ အရမ်းတွေဖလှယ်နေကြသည်။ ထဘီပါးပါးလေးအောက်က ခိုင်သူ၏တင်သားများသည် တင်းရင်းကာ ရဲဇော်အတွက် အရမ်းကိုင်ကောင်းနေသည်။ ထိုနောက်ရဲဇော်က ခိုင်သူ့အင်္ကျီလေးမှ ကြယ်သီးများကိုဖြုတ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူ့နို့လေးများသည် ထွားလှသောကြောင့် ဘရာလေးထဲမှရန်းထွက်နေသည်။ ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ့ဘရာလေးကို ပင့်တင်ကာ နို့လေးများသို့ လက်တစ်ဖက်က စုတ်နယ်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေသည်။ ထို့နောက်ရဲဇော်သည် ခိုင်သူ့လည်ပင်းသားလေးကို စုပ်ကာ နီနီရဲရဲအမှတ်ကလေးပေးလိုက်သည်။
“မောင် ခိုင့်နို့လေးတွေကိုစို့ပေး မောင်စို့ပေးတာလေးခံချင်လှပြီ ဟင့်ဟင့်” ရဲဇော်ကလဲ ခိုင်သူ့နို့လေးတစ်ဖက်သို့ ကုန်းကာစို့လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ အရမ်းကောင်းကာ ရဲဇော်နို့လေးစိုပေးနေတာကို မျက်လုံးလေးမှတ်ကာ ခံစားနေသည်။ ခိုင်သူ့နို့သီးခေါင်းလေးကို တစ်ဖက်ကချေပေးရင်း တစ်ဖက်ကစုပ်ကာ နမ်းပေးနေသည်။ ထိုနောက် ရဲဇော်ကကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ခိုင်သူ့ဗိုက်သားလေးများကို နမ်းပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ထဘီလေးကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက် ခိုင်သူ့ပင်တီလေးပေါ်မှ ဖုတ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ထိုးကာ ယက်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ဖုတ်လေးနှင့်ပွတ်ရင်း ကာမအရသာကိုခံနေသည်။
“မောင် ခိုင့်ဖုတ်လေးကိုယက်ပေး အား…… အရမ်းကောင်းတယ်မောင်” “ခိုင် ပင်တီလေးချွတ်လိုက်နော် မောင်က ခိုင်စောက်စိလေးကို စုပ်ပြီးနမ်းချင်လို့ ” “အား မောင်ကလဲ မောင်ချွတ်ပေးကွာ ဖုတ်ထဲကအရမ်းယားနေပြီ မောင်မြန်မြန်နမ်းပေးတော့ကွာ” ရဲဇော်က ခိုင်သူပင်တီလေးကို ချက်ချင်းချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို လျှာဖြင့်ထိုးကာ ဖွဖွလေးယက်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလည်း စောက်စိလေးကိုထိမိကာ ကျောထဲကစိမ့်ကာ ကျင်တတ်လာသည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို နဲနဲဖြဲကာ စောက်စိလေးကို လျှာဖြင့်ထိုးယက်လိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ တီကောင်ကိုဆားဖြင့်တို့သလို တွန့်လိမ်ကာ အရမ်းကောင်းနေသည်။ စောက်စိလေးကို စုပ်ကာ ဖုတ်လေးကိုအားရအောင် စုပ်နေတော့သည်။ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှလဲ စောက်ရည်များထွက်ကာ အရမ်းကောင်းနေသည်။
ခိုင်သူက ရဲဇော်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်လေးနှင့် ပွတ်ကာ ကာမအရသာကို ခံစားနေသည်။ “မောင် ခိုင်းအရမ်းလိုချင်နေပြီ ခိုင်ကိုလိုးပေးပါတော့နော်” “လိုးပေးမှာပေါ့ခိုင်ရဲ့ နံရံကိုမှီပြီးကုန်းလိုက်နော်” “ဟုတ် လာမောင့်အဝတ်စားတွေချွတ်ပေးမယ်” “အတာကြောင့်ခိုင့်ကိုအရမ်းချစ်ရတာ ပြွတ်” ရဲဇော်က ခိုင်သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူက ရဲဇော်ရဲ့အဝတ်စားများကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူသည် ရဲဇော်လီးကြီးဖြင့် ခံနေကြဖြစ်သော်လည်း တောင်နေသောလီးကြီးကိုမြင်ကာ ရင်တွေခုန်နေတော့သည်။ “မောင် မောင့်လီးကြီးက ထောင်မက်နေတာပဲ ပြီးတော့အကြီးကြီးပဲနော်” “ခိုင့်ကိုလိုးချင်နေတာလေ ခိုင်ဟိုဘက်လည့်ပြီးကုန်းပေးတော့နော်”
“အား…..အား…..ဖြေးဖြေးထည့်မောင် ခိုင်နာနေသေးတယ်” ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ သူ့လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်လီးကြီးကိုမျက်စီမှိတ်ကာ ခံပေးနေသည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်သည်။ “အား….. အား……. မောင် အရမ်းထိတယ်ကွာ မောင့်လီးကြီးက သားအိမ်ကိုထိထိသွားတယ်” “မောင်လိုးပေးတာ ကြိုက်လားဟင်” “ကြိုက်တာပေါ့မောင်ရဲ့ လိုးလိုး ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေး အား……. အရမ်းကောင်းတယ် အား… အား……. အား………အွင့်……..” “ခိုင် မောင်မောနေပြီကွာ ခိုင်မောင့်ပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးနော်” “ဆောင့်ပေးမှာပေါ့မောင်ရဲ့ လာလေခိုင်တို့အခန်းထဲ သွားရအောင်” ခိုင်သူက ရဲဇော်လီးကိုကိုင်ကာ အခန်းထဲသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားသည်။
ရဲဇော်ကလဲ နောက်ကလိုက်ရင်း ခိုင်သူ့ဖင်တွေကို လှမ်းရိုက်လိုက်သည်။ “ဖြန်း….ဖြန်း….အား….အား….” “ခိုင့်အိုးကြီးကို ဘယ်သူကမှ ပြိုအောင်ဖြိုနိုင်မယ် မထင်ဘူးကွာ ခိုင်ကအရမ်းတောင့်တာပဲကွာ” “မောင်ကတော့ပိုပြီကွာ မောင်လိုးတာနဲ့တင် ခိုင်ပုံပျက်တော့မယ် ဟွင့်” ရဲဇော်က ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ့်ကာ လီးကိုထောင်ပေးထားလိုက်သည်။ ခိုင်သူက ရဲဇော်လီးပေါ်ကို တတ်ခွပြီး လီးကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲသို့ ဆောင့်သွင်းကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူက ဆောင့်နေရင် ရဲဇော်နှုတ်ခမ်းတွေကို အားရပါးရနမ်းရင်း ဆောင့်နေသည်။
ရဲဇော်ကလဲ ခိုင်သူဖင်ကြီးကိုကိုင်ကာ အောက်ကနေပင့်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ “အား………. အား……… မောင်….. မောင်….. ပင့်ဆောင့်ပေး ခိုင်အရမ်းကောင်းနေပြီ” “ခိုင်းပြီးတော့မှာလားဟင် မောင်လဲအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” “မောင်…… ခိုင်ပြီးတော့မယ် ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပေး…. အရမ်းကောင်းတယ်… အား……အား…….” ခိုင်သူကလဲ အပေါ်ကခမ်ကြမ်းကြမ် ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က အောက်ပင့်လိုးရင်း နှစ်ယောက်လုံး ကာမအထွဋ်ထိပ့်သို့ ရောက်ကာ ပြိုင်တူပြီးသွားကြသည်။ ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော် ပြန်လာချိန်တွင်တော့ သူဇာနှင့်ကျော်ထက်တို့သည် သူမတို့မသွားခင်က ပုံစံမဟုတ်တော့တာကို တအံတသြ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူဇာကကျော်ထက်ရင်ခွင်ထဲသို့ ခေါင်းလေးတိုးကာ ချွဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
ကျော်ထက်မျက်နာကလဲ မှိုရတဲ့မျက်နာလို ပြုံးဖြီးနေသည်။ “အမလေး အမလေး ကြည့်ပါဦး ကြည်နှုးနေလိုက်တာ မမ ပြောတော့ကျတော့ ရှင့်ကိုပြောစရာမရှိပါဘူးဆို ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ” “ခိုင်သူနော် နင်ပဲငါ့ကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့ ခုမှလူကိုလာပြီး အပြစ်တင်နေတယ်” “ဟုတ်ပါပြီတော် ကြည်နူးမနေကြနဲ့တော့ ကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်နေပြီ ပြန်ကြရအောင်” “အေးပါအေဟဲ့ သူတို့ကကြသာယာလာပြီးတော့ ဟွန့်” “ကို သူဇာတို့မနက်ဖြန်ကြ တွေ့မယ်နော် ကိုအားတယ်မို့လား” “အားတာပေါ့သူဇာရဲ့ သူဇာ့အတွက်ဆို ကို့ဘဝရဲ့အချိန်တွေအားလုံးပေးနိုင်တယ်” “ဟားဟား ပိုတယ်နော် ကိုကျော်ထက်” “ဟုတ်ပါပြီကိုရယ် တာ့တာနော်”
ကျော်ထက်သည် သူဇာ့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်း ခိုင်သူ့လည်ပင်းထက်မှ အနမ်းကြမ်းကြမ်းကြောင့် စွန်းထင်လာတဲ့ အမှတ်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ ရဲဇော်တို့လိုးလာပြီဆိုတာ ကျော်ထက်မပြောပဲသိလိုက်ရသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ တစ်နေ့ ခိုင်သူ့ကိုလိုးမည်ဟုကြိတ်ကာပြစ်မှားလိုက်သည်။ သူဇာနဲ့ကျော်ထက် ခိုင်သူနဲ့ရဲဇော်တို့ဟာ ကျောင်းထဲတွင် လူတိုင်းအားကျရတဲ့ အတွဲများဖြစ်လာကြသည်။ ကျော်ထက်နှင့်ခိုင်သူကလဲ အရင်ကထက်ပိုနီးကပ်ကာ ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ် ပုံစံနှင့်အနေနီးလာကျသည်။ သူဇာနှင့်ရဲဇော်ကတော့ အရင်ကပုံစံတိုင်း ခင်မြဲခင်ကြသည်။ သိုသော် ရဲဇော်စိတ်ထဲတွင် သူဇာကို ကြိတ်၍သဘောကျနေခဲ့သည်။
ရဲဇော်သည် ခိုင်သူနှင့်လိုးသည့် အချိန်များထိပင် သူဇာကိုစိတ်ထဲတွင်မှန်းကာ ခိုင်သူ့ကိုလိုးလာသည်။ ကျော်ထက်ကတော့ ခုချိန်ထိ သူဇာ့ကိုနို့ကိုင်ရုံ နှုတ်ခမ်းလေးနမ်းရုံသာ အခွင့်ရေးရသေးသည်။ ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်ကတော့ အမြဲလိုလို ချိန်းတွေ့ကာ လိုးဖြစ်ကြသည်။ ရဲဇော်ကတော့သူဇာ့ကိုလိုးရန် အခွင့်ရေးကိုစောင့်နေသည်။ တစ်နေ့ သူဇာသည် ခိုင်သူ့ဖုန်းထဲမှ ပုံများကူးရန် ဖုန်းကိုယူကာ ပုံများကူးနေလိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင် ခိုင်သူ့ဖုန်းထဲမှ သူဇာ့ရင်ကို ဗြောင်းဆန်သွားစေသော ပုံတစ်ပုံကို အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုပုံထဲတွင် ကျော်ထက်နှင့်ခိုင်သူတို့ အဝတ်စားများမပါပဲ အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင် နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းနေကြသည်။ ထိုပုံမှdateကို သူဇာကြည့်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်တစ်ယောက် စောင့်နေကြနေရာမှ သူဇာတို့အလာကို စောင့်နေသည်။
ခဏအကြာတွင် ခိုင်သူတစ်ယောက်ထဲ ကျော်ထက်ရှိရာသို့ ရောက်လာသည်။ “ကိုကျော်ထက် စောင့်နေတာကြာပြီလား ခိုင်သူနဲနဲနောက်ကျသွားတယ်” “မကြာသေးပါဘူး ခိုင်သူရဲ့ ဒါနဲ့သူဇာနဲ့ရဲဇော်ရော” “မပါဘူးကိုကျော်ထက်ရဲ့ မမကနေမကောင်းလို့တဲ့ မောင်ကတော့ရွာပြန်သွားတယ်” “ဟုတ်လား အတာဆို အကိုတို့တော့ ဘက်ပဲ့ပါပြီ” “ခိုင်သူရှိနေတာပဲ ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ အော် ဒါနဲ့ကိုကျော်ထက် ခိုင်သူ့ကို supermarket လိုက်ပို့ပါလား ကိုကျော်ထက် အားရင်ပေါ့” “အချိန်ရတာပော့ အကိုလဲတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ သွားကြမယ်လေ” ဆက်ရန်….. ကျော်ထက်ကားလေးနှင့် ခိုင်သူတို့နှစ်ယောက် ကျောင်းထဲမှထွက် လာကြသည်။
လမ်းတွင်ခိုင်သူက ဝိုင်သောက်ချင်သည် ဆိုသောကြောင့် ကျော်ထက်နှင့် ခိုင်သူတို့နှစ်ယောက် ဝိုင်ပုလင်းများနှင့် ဘီယာများဝယ်ကာ အေးဆေးသောနေရာ သို့ထွက်လာကြသည်။ ကျော်ထက်၏ အကြည့်များကို ခိုင်သူရိပ့်မိနေသည်ဖြစ်သည်။ ခိုင်သူသည် နည်းနည်းမူးလာသောကြောင့် စကားပြောများလဲရဲလာခဲ့သည်။ ခိုင်သူ၏စိတ်ထဲတွင်လည်း ကျော်ထက်ကို ကြိတ်ကာကြွေနေသည်။ “ကိုကျော်ထက် ဘယ်လိုလဲ မမနဲ့ကဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်နေကြပြီလဲ” “ဘယ်အဆင့်မှ မရောက်သေးပါဘူးဟာ မင့်းမမက အရမ်းမူနေလို့” “ဟားဟား အတာဆို ကိုကျော်ထက်ခုထိမစားရတေးဘူးပေါ့”
“အေးပေါ့ဟ မင်းကတော့ ရဲဇော်ကိုပေးတယ်မို့လား ငါသိနေတယ်” “ပေးတယ် ဒါပေမဲ့ ရဲဇော်ကခြေရှုပ်တယ် အပြင်ကလူတွေနဲ့လဲနေတယ် အတာတွေကို ညီမမကြိုက်ဘူး” “ဟုတ်လား မင်းကမထိန်းဘူးလား” “ထိန်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့မရဘူး ညီမသူ့ကိုမကျေနပ်ဘူး လက်စားချေချင်တယ် ကိုကျော်ထက် ကူညီမလား” “ဟင် ငါကဘယ်လိုကူညီရမှာလဲ ဘာလဲ ရဲဇော်ကိုပြောပေးရမှာလား” “ညီမလဲသူ့လို အပြင်မှာနေမယ်လေ ခုတောင်သူ့ရွာဖက်က အဆက်စီသွားတာတဲ့” “ဖြစ်ပါ့မလားဟ သူဇာသိရင် ပြသနာတတ်နေဦးမယ်” “ဟာ ကိုကျော်ထက်ကလဲ မမ မသိအောင်နေမှာပေါ့ ဘာလဲမကူညီချင်ဘူးလား ကိုကျော်ထက်မကူညီနိုင်လဲ ညီမတစ်ခြားတစ်ယောက်စီ သွားလိုက်မယ်”။
“အလိုမဟုတ်ပါဘူးဟာ မသင့်တော်ဘူးထင်လို့ပါ ငါကကူညီချင်ပါတယ်ဟ” ကျော်ထက်လဲ စားရခံကြုံနေသည်မို့ လက်လွတ်မခံပဲ နှစ်ယောက်သား ဟော်တယ်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ ခိုင်သူတစ်ယောက် ဟော်တယ်သို့ရောက်ချိန်တွင် အရမ်းကိုမူးနေပြီဖြစ်သည်။ ခိုင်သူက ရေချိုးချင်သေးသည်ဟု ဆိုကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို အပြင်ကစောင့်ရန် ထိုင်နေလိုက်သည်။ ခဏအကြာတွင် ခိုင်သူက တဘက် အပါးလေးကိုပတ်ကာ ပြန်ထွက်လာသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို မျက်လုံးကျွတ်ကျမတတ်ကြည့်နေသည်။ “ကိုကျော်ထက် ခိုင်သူတစ်ယောက်ထဲ ချိုးရမှာ ပျင်းတယ် ကိုကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူနဲ့အတူ ရေလာချိုးလေ” ထိုချိန်တွင် ကျော်ထက်လဲ အချိန်စိုင်းမနေပဲ ခိုင်သူ့နောက်မှလိုက်သွားသည်။
ရေချိုးခန်းထဲတွင် ခိုင်သူက သဘက်လေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ အနက်ရောင်အတွင်းခံလေးများနှင့် ခိုင်သူက အရမ်းဆက်စီကျနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ခိုင်သူ့ခါးလေးကိုဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ပြန်ကာနမ်းသည်။ ကျော်ထက်လက်က ခိုင်သူ့ပင်တီလေးထဲထိုးတာ ဖုတ်လေးကိုပွတ်ကာ စောက်စိလေးကို ချေပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ဖီးတွေတအားထန်ပြီး အရည်တွေပါစိုနေသည်။ ကျော်ထက်လီးကလဲ ဘောင်ဘီထဲမှ ရုန်းထွက်နေသည်။ ခိုင်သူက အလိုက်သိစွာ ကျော်ထက်ဘောင်းဘီကို နမ်းရင်ချွတ်လိုက်သည်။
ဘောင်းဘီထဲမှ ထွက်လာသော ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာဂွင်းထုပေးနေသည်။ ခိုင်သူက အနမ်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ကျော်ထက်ရင်ဘက်ကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ကပ်ကာ လိုက်နမ်းလိုက်သည်။ ထိုနောက်ခိုင်သူက အောက်သို့ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ကျော်ထက်လီးကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ပွတ်ကာပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ကျော်ထက်လီးဒစ်ကို ငုံကာစုပ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူက လီးဒစ်လေးကို လျှာနှင့်ပတ်ကာ မွှေကာစုပ်နမ်းပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူစုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းသောကြောင့် မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ ကာမအရသာကို ခံစားနေသည်။
အား…….အား……….အရမ်းကောင်းတယ် ခိုင်သူရယ် မင်းကအရမ်းစုပ်တတ်တာပဲကွာ” “မင်းနှုတ်ခမ်းလေးကိုတော့ စွဲသွားပြီး ခိုင်သူရယ်” ကျော်ထက်လဲ အရမ်းအရှိန်တတ်ကာ ခိုင်သူ့ခေါင်းကိုကိုင်းပြီ လီးကြီးကိုစောင့်စောင့်ထည့်နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ပေါင်ကိုကိုင်ကာ လီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် စုပ်ပေးနေသည်။ ကျော်ထက်က လီးကြီးကို ခိုင်သူ့ပါစပ်ထဲ အဆုံးထိဝင်အောင် ထည့်ကာ ညောင့်လိုးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ အရမ်းကောင်းကာ ခိုင်သူ့ပါးစပ်ထဲသို့ လရည်များပန်းထုပ်လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ထွက်လာသောလရည်များကို အကုန်စင်အောင် မျိုချလိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ကိုထူကာ သူ့လီးကြီးကိုစုပ်ထားသော နှုတ်ခမ်းများကို တတ်မက်စွာ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။
ထိုနောက် ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်တို့သည် ရေစိမ်ကန်တွင် ရေစိမ်ရင်း ရေချိုးကာဇိမ်ခံနေကြသည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေသည်။ လက်တစ်ဖက်ကလဲ ခိုင်သူ့နို့လေးများကို စုတ်ကိုင်နေသည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ဘက်သို့စောင်းကာ နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်ကာနမ်းနေသည်။ ခိုင်သူသည် စောက်ဖုတ်လေးသို့ရောက်နေသော ကျော်ထက်လက်များကို ပွတ်ကာ ကာမအရသာကိုခံစားနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ထိုးကာမွှေပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ်လေးမှာ ကျော်ထက်လက်ကို အထဲမှနေ၍ ညစ်ပေးနေသည်။
ကျော်ထက်လဲ စောက်ဖုတ်လေးကို ခမ်ကြမ်းကြမ်းမွှေပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲအရမ်းကောင်းကာ ကော့ပျံနေတော့သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူဖုတ်လေးထဲမှ လက်ကိုနုတ်ကာ စောက်စိလေးကို ဖိကာပွတ်ပေးလိုက်ချိန်တွင် ခိုင်သူလဲ ကာမအရသာရဲ့ အထွဋ်ထိပ့်ကိုရောက်ကာ ပြီးသွားသည်။ ထိုနောက် ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်လဲ တဘက်လေးများကို ပတ်ကာ အိပ့်ယာပေါ်တွင်ဖက်ရင်း အမောဖြေကာအနားယူနေကြသည်။ ထိုချိန်တွင်ခိုင်သူက “ကိုကို ခိုင်သူဖုတ်လေးကို ကိုကို့နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ အနမ်းပေးပါဦးနော်” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့တဘက်လေးကိုဖြည်ကာ စောက်ဖုတ်ထက်က ဆီးဂုံထက်ပိုင်းလေးကို စနမ်းလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးက ရဲဇော်လိုးထားသောလဲ ပုံတော့သိပ့်မပျက်သေးပေ။ ဖုတ်လေးမှာ ဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် ချစ်ဖို့ကောင်းနေသည်။
ခိုင်သူကလဲ ပေါင်လေးကိုကားပေးလိုက်ပြီး ကျော်ထက်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ဖုတ်လေးဖြင့်ကော့ကာ ပွတ်နေသည်။ “ကိုကို” “ဟင် ပြောလေ ခိုင်သူရဲ့” “ကိုကိုကပက်လက်လေးနေပေး ခိုင်သူက ကို့ကိုနှုတ်ခမ်းလေးပေါ်ကို ဖုတ်လေးနဲ့ပွတ်ပြီး အရသာခံချင်လို့” “လုပ်လေခိုင်သူရဲ့ ခိုင်သူကအရမ်းလုပ်တတ်တာပဲကွာ” ကျော်ထက်လဲ အိပ့်ရာပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ပေါ်လို့ခွကာ မျက်နာပေါ် ဖုတ်လေးနှင့် ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ထိုးကာ ယက်ပေးနေလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲအရမ်းဖီးများတတ်ကာ သူ့နို့များကိုပြန်ကာ နယ်ရင်းပွတ်နေလိုက်သည်။
“ကိုကို ခိုင်သူမနေနိုင်တော့ဘူးကွာ ကိုကိုလုပ်ပေးတော့” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို လဲပြီးတော့ အပေါ်မှ လှေကြီးထိုးရိုးရိုပုံစံနှင့် တန်းလိုက်လိုက်သည်။ ခိုင်သူ့အဖုတ်မှာ အရင်ထဲက အရည်တွေစိုနေပြီမို့ လိုးရတာအရမ်းကောင်းနေသည်။ ခိုင်သူ့ဖုတ်ကလဲ အရမ်းညစ်အားကောင်းသောကြောင့် အပျိုလိုးရတာထက်ပင် ပို၍ကောင်းနေသည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်လည်ပင်းကိုဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းများကို အတင်းနမ်းနေသည်။ “အား…….အား…… “ခိုင်သူရယ် မင်းဖုတ်လေးက အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ မင်းဖုတ်လေးကို အမြဲလိုးချင်တယ်ကွာ ကိုကိုပဲအမြဲလိုးနော် ကိုကို့လီးကြီးကိုကြိုက်တယ် အား…. အား…. ဆောင့်လိုးပေး…. အား…… အရမ်းကောင်းတယ်..အရမ်းကောင်းတယ် ခိုင်သူရယ်။
မင်းဖုတ်လေးနဲ့ညှစ်ပေး အား….. ကောင်းလိုက်တဲ့ဖုတ်လေးကွာ” “အား….. လိုး……. လိုး…. ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေး အရမ်းကောင်းတယ် ” အား…… အား….. ခိုင်သူပြီးတော့မယ် အား…….”ကောင်းလားခိုင်သူ ငါလိုးပေးတာကောင်းလား” “အား…. အား….. အွင်း…….. အွင်း…….. ခိုင်သူပြီးပြီး အရမ်းကောင်းတယ်ကိုကိုရယ်” ကျော်ထက်ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းဖြင့် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သောကြောင့် ခိုင်သူခဏလေးတင်ပြီးသွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူပေါ်တွင်မှောက်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်းဂဟေဆက်ကာ အနမ်းပေးရင်းအမောဖြေနေကြသည်။ ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးသည် လီးကြီးကိုညစ်ကာ ကာမအရသာများကို အပြည့်ဝခံစားနေသည်။ ခိုင်သူတစ်ချီပြီးသွားသော်လည်း ကျော်ထက်လီးကြီးက တောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
“ကိုကို ကိုကိုမပြီးတေးဘူးလားဟင်” “မပြီးတေးဘူးလေ ခိုင်သူရဲ့” “အတာဆို ကိုကိုဆက်လိုးလေ ခိုင်သူဘယ်လိုနေပေးရမလဲဟင်” “ခိုင်သူ့ကို ရဲဇော်က ဖင်လိုးပြီးပြီလားဟင်” “ဟင့်အင်း မလိုးပါဘူးကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုကဖင်လိုးမလို့လား” “ဟုတ်တယ် ကိုကိုခိုင်သူ့ဖင်ကိုလိုးချင်လို့” “ဟင့်ဟင့် ခိုင်သူနာမှာကြောက်တယ်” “မနာပါဘူး ခိုင်သူရဲ့” “ခိုင်သူကြောက်တယ် ကို့ကိုလီးကြီးက အကြီးကြီပဲ” “ဖြေးဖြေးလေးပဲ လုပ်မယ်နော် ခိုင်သူမခံနိုင်ရင် ဆက်မလုပ်ဘူးနော်” ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ကိုအရွဲတိုက်ချင်တာနှင့် ကျော်ထက်ကို ဖင်လိုးခံရန် အသင့်ပြင်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ဖင်လေးကိုဖြဲကာ ဖင်ပေါက်လေးထဲကို တံတွေးထွေးထည့်လိုက်သည်။ ပြီးမှလက်တစ် ချောင်းစထိုးလိုက်သည်။
ခိုင်သူ့ဖင်လေးက ပါကင်လေးမို့ ကြပ်နေသည်။ ကျော်ထက်လဲ လက်ချောင်းလေးနှင့် ခိုင်သူ့ဖင်လေး အဝင်ထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက် လက်တစ်ချောင်းထဲနှင့် အသွင်းထုပ်ကောင်းချိန်တွင် လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ထိုးကာ ချဲ့ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ စိတ်ထဲတွင်မရိုးမယွဖြစ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ယားတတ်လာသည်။ “ကိုကို ခိုင်သူ့ဖင်ကိုလိုးပေးတော့ ခိုင်သူအရမ်းခံချင်နေပြီကွာ” “လိုးပေးမှာပေါ့ ခိုင်သူရဲ့ ဖင်လေးကိုဖြဲပေးထားနော်” ကျော်ထက်က ခိုင်သူဖြဲပေးထားသော ဖင်လေးကို လီးဒစ်ကြီးဖြင့်တေ့လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ဖင်းကြီးကို လိုးကောင်းစေရန် ပြဲသထက်ပြဲအောင် ဖြဲပေးထားသည်။ ကျော်ထက်သည် ခိုင်သူ့ဖင်ကို တံတွေးနည်းနည်းစွတ်ကာ လီးဒစ်ကြီးထိုးစိုက်ပြီး လိုးလိုက်သည်။
“အား…….အား……..ကိုကိုဖြေးဖြေး” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ဖင်လေးထဲသို့ အားစိုက်ကာ ထပ်ထိုးချလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ အရမ်းနားသွားသောကြောင့် ကော့ပျံသွားသည်။ ထို့နောက် ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ပေါ်သို့ မှောက်ကာ လည်ဂုတ်သားလေးကိုနမ်းရင်း နို့လေးစိုကချေကာ ညှောင့်ပေးနေလိုက်သည်။ ခိုင်သူက ခဏအကြာတွင် နောက်သို့ပြန်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပေးလာသည်။ ခိုင်သူကောင်းနေတာကိုသိသော ကျော်ထက်က ခိုင်သူခါးလေးကိုကိုင်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ အရမ်းကောင်းကာ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်လေးများဖြင့်ပွတ်ကာ ကျော်ထက်ဆောင့်သမျှကို ခံနေသည်။
“အား……. အား……. ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ် ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးထဲလဲ အရမ်းယားတာပဲ” “အား…….. အား……… မင်းဖင်လေးကစီးနေတာပဲကွာ လိုးရတာအရမ်းကောင်းတာပဲ ခိုင်သူလဲ ပြန်ဆောင့်ပေးလေ” “ကိုကိုမောနေပြီလားဟင် ခိုင်သူအပေါ်ကတတ်ဆောင့်ပေးမယ်လေ” “ကောင်းတာပေါ့ခိုင်သူရဲ့ လာ ခိုင်သူက အရမ်းအလိုက်သိတာပဲကွာ” ခိုင်သူက ကျော်ထက်ပေါ့သို့ခွကာ ထောင်ပေးထားသော လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ဖင်ထဲတေ့ကာ ဆောင်ကာထိုင်ချလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ အောက်မှနေ၍ ခိုင်သူ့နို့လေးများကို ကိုင်နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ ဖုတ်လေးကိုပွတ်ကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေလိုက်သည်။ ကျော်ထက်နဲ့ခိုင်သူလဲ မီးကုန်ရမ်းကုန်းလိုးလိုက်ကြသည်။ ခိုင်သူက အပေါ်ကဆောင့်နေရင်း ၁၅မီးနစ်အကြာတွင် ပြီးသွားသည်။
ကျော်ထက်လည်း အောက်ကထပ်ဆောင့်ရင်း ခဏကြာတွင် ပြီးသွားတော့သည်။ ရဲဇော်လဲ ကျောင်းကအပြန်တွင် ရေးမိုးချိုးကာ အနားယူရင်း အခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲ အချစ်တက္ကသိုလ်မှစာများကို ဖက်နေသည်။ ထိုချိန်တွင် အခန်းရှေ့မှ လူခေါ်ဘဲလ်တီးသံ ကြားလိုက်ရသည်။ ရဲဇော်လဲ ပုဆိုးကို သေချာပြင်ဝတ်ပြီး အခန်းတခါးကို သွားဖွင့်လိုက်သည်။ “ဟာ မသူဇာ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟင်” ရဲဇော်သည် သူဇာ့ကိုမြင်သည်နှင့် ကာမစိတ်များတတ်ကြွလာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဇာက မြန်မာဝတ်စုံလေးနှင့် နို့များတင်များက တင်းရင်းကာ ယောက်ျားသားတိုင်း မျက်စီကျလောက်အောင် လှနေသည်။ ထို့နောက် ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ကိုအခန်းထဲခေါ်ကာ ဧည့်ခံစားပွဲတွင် ထိုင်ကာဆက်မေးလိုက်သည်။
“အား….. မောင်….. နာတယ်ကွာ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ” “မမက ခုမှအပျိုပဲရှိတေးတာလားဟင်” “ဒါပေါ့ကွ မမဘယ်သူနဲ့မှ မခံဘူးသေးဘူး” “ဟာ ကျွန်တော်အရမ်း ကံကောင်းတာပဲဗျာ မမကိုအရမ်းချစ်သွားပြီးဗျာ” ရဲဇော်လဲအရမ်းပျော်ကာ သူဇာ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းရင်း လီးကြီးကိုညှောင့်ကာ သွင်းလိုက်သည်။ သူဇာလဲ သူမ၏ အပျိုစောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ တိုးဝင်လာသော လီးကြီးဒဏ်ကိုကြိတ်ခံရင်း ရဲဇော်ကိုတအားဖက်ထားလိုက်သည်။ ရဲဇော်လဲ သူဇာကို ဖြေးဖြေးညှောင့်ကာလိုးရင်း လီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် လိုးလိုက်သည်။ ထိုနောက် လီးကြီးကို ညှောင့်ကာလိုးရင်း သူဇာခံနိုင်ချိန်မှ လီးကြီးကို တစ်ဝက်လောက်ထိထုပ်ကာ ခပ်စပ်စပ်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
“အား…… အား…… မောင့်လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲကွာ မမစောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲကွာ” သူဇာလဲ ပေါင်ကိုးပေးထားရင်း ရဲဇော်လိုးသမျှကို ပါစပ်မှတတွတ်တွတ်ပြောရင်း အလိုးခံနေသည်။ ရဲဇော်လဲ သူဇာခံနိုင်ပြီးဆိုတာ သိသောကြောင့် အားဖြင့် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုပြစ်လိုက်သည်။ “အား…..အား…… အား… “ကောင်းလိုက်တာမမရယ် မမစောက်ဖုတ်းလေးက စီးကြပ့်နေတာပဲဗျာ” “မမလဲအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ လိုးလိုး ဆောင့်ဆောင့်လိုပေး မင်းလီးကြီးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်” ထိုနောက်ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ကို ကုန်းခိုင်းကာ နောက်မှဆောင့်လိုးရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ သူဇာလဲ ကုတင်ပေါ်တွင် လက်ထောက်ကာ ရဲဇော်အလိုးကိုခံရန် ကုန်းပေးလိုက်သည်။
နောက်သို့ဖောင်းကာ ထွက်လာသော သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ရဲဇော်က အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှလီးကြီးကိုကိုင်ကာ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့ဖင်ကြီးကိုကိုင်ကာ နောက်မှ တအားဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးနေသည်။ သူဇာ့ဖင်ကြီးကလဲ ရဲဇော်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ခါရမ်းကာနေသည်။ ရဲဇော်ဆောင့်အားကြောင့် သူဇာလက်ပင် မထောက်ထားနိုင်တော့ပဲ ဖင်ကြီးကိုထောင်ကာ ဝတ်ပြီးခံနေလိုက်သည်။ အား… အား…… အား….. “ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် လိုး လိုး အားရပါးရ လိုး”အား…… ကောင်းလိုက်တာမမရယ် မမလဲပြန်ဆောင့်ပေးနော် မမဖင်ကြီးကအယ်နေတာပဲ အရမ်းလိုးလိုးကောင်းတာပဲ”သူဇာလဲ ရဲဇော်ပြောတဲ့အတိုင်း ဖင်ကြီးဖြင့်ပြန်ကာ ဆောင့်ဆောင့် ပေးလိုက်သည်။
စောက်ဖုတ်ထဲမှာလဲ သူဇာ့စောက်ရည်တွေကြောင့် အသံမျိုးစုံထွက်နေသည်။ ရဲဇော်အခန်းလေးမှာလဲ လူနှစ်ယောက်လိုးသံများနှင့် ဆူညံနေသည်။ “မမ အပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးပါလား မမနို့တွေကိုဆွပြီး ကိုင်ချင်လို့” “အတာဆို ပက်လက်လှန်လိုက်လေမောင်ရဲ့ မမတတ်ဆောင့်ပေးမှာပေါ့” ရဲဇော်လဲ ပက်လက်လှန်ကာ လီးကိုကိုင်ပြီး ထောင်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာက ရဲဇော်ပေါ်သို့ခွကာ စောက်ဖုတ်နှင့်လီးကိုတေ့ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ရဲဇော်က အပေါ်ကနေဆောင့်ပေးနေသော သူဇာ့နို့တွေကိုဆွဲကာ သူဇာဆောင့်ပေးသမျှကို ခံစားနေသည်။
အား………. ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် အောက်ကနေပြန်ဆောင့်ပေး မမပြီးတော့မယ်”ရဲဇော်ကလဲ အောက်ကနေပြီး ပင့်ကာဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာလဲ ပြီးခါနီးသောကြောင့် စောက်ရည်များပို၍ ထွက်လာသည်။ သူဇာလဲ ရဲဇော်ပေါ်မှ ၁၅ ချက်ခန့် ဆောင်ကာ ပြီးသွားတော့သည်။ ရဲဇော်က သူဇာသွားပြီးသွားသော်လည်း အောက်ကနေဆက်ကာ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင်သူဇာက ရဲဇော်ပေါ်သို့မှောက်ကာ အမောဖြေနေသည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့နားကပ်ကာ လီးစုပ်ပေးရန် ပြောလိုက်သည်။ သူဇာကလဲထကာ စောက်ရည်များနှင့် ပြောင်လက်နေသော ရဲဇော်လီးကြီးကို ကိုင်ကာစုပ်ပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့ခေါင်းကိုကိုင်ကာ လီးကြီးကို အဆုံးထိထိုးကာ သူဇာ့အားခေါင်ထဲတွင် စိမ်ထားလိုက်သည်။
သူဇာ့မျက်နာတစ်ခုလုံး နီရဲတတ်လာသည်။ ရဲဇော်ကလဲ သူဇာ့အားခေါင်ထဲတွင် လရည်များကို ပြန်းထုပ်လိုက်သည်။ ရဲဇော်လရည်များသည် အထိန်ကွတ်မရှိပဲ သူဇာ့ပါစပ်ထဲသို့ အကုန်ထည့်လိုက်တော့သည်။ “သူဇာ ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ကို့ကိုခွင့်လွတ်ပါနော်” “ဟားဟား ရော့ သူဇာ့ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးမှ တောင်းပန်တာဆက်ပြော” ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့ဖုန်းကိုယူကာ သူဇာပြသောပုံကိုကြည့်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်ဖုန်းကိုကြည်ကာ အရမ်းအံသြသွားသည်။ ဖုန်းထဲတွင် သူဇာက ရဲဇော်ရင်ခွင်ထဲတွင် အဝတ်စားမပါပဲ ဖက်ကာအိပ့်နေသည်။ ကျော်ထက်လဲ နောက်ပုံများကို ဆက်ကာကြည့်လိုက်သည်။
နောက်ပုံထဲတွင် သူဇာက ရဲဇော်လီးကြီးကို တတ်မက်စွာ စုပ်ပေးနေသည်။ ရဲဇော်က သူဇာ့စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေပုံများကိုလဲ သေချာပီပြင်စွာရိုက်ထားသည်။ သူဇာရယ် လုပ်ရက်လိုက်တာကွာ” “ကိုအရင်လုပ်ခဲ့တာပါ သူဇာ့အပျိုစင့်ဘဝက ကိုနဲ့မတန်လို့ သူများကိုပေးလိုက်တာ” “ဟုတ်ပါပြီသူဇာရယ် သူဇာကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ကိုလဲကျေနပ်ပါတယ်” “ဟုတ်ပါပြီ သူဇာမနေ့ညထဲက ခုထိအိမ်မပြန်ရတေးဘူး အိမ်ပြန်ပြီးရေမိုးခိုးခဲ့ဦးမယ် ပြီးမှတွေ့တာပေါ့” “ဟင် ဒါဆိုသူဇာက ရဲဇော်စီကနေ ခုမှပြန်လာတာပေါ့”။ “ဟုတ်တယ်လေကိုရဲ့ ရဲဇော်ကအရမ်းလုပ်နိုင်တာပဲ တညလုံးဆက်တိုက်သူဇာ့ကို လုပ်လိုက်တာ ပေါင်တောင်နဲနဲကွနေတယ်” “ဟုတ်ပါပြီသူဇာရယ် သူဇာအိမ်ပြန်မနေနဲ့တော့လေ အိမ်ပြန်ရင်တခြားလူတွေရိပ့်မိနေမယ် ကိုနဲ့တူတူ ဟော်တယ်မှာ သွားနားကြမလား”
“Ok လေ သွားကြတာပေါ့” သူဇာလဲ ကျော်ထက်အပေါ် လွန်သွားသောကြောင့် ကျော်ထက်အကြံကနု သိသော်လဲ ဟော်တယ်ကိုလိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ သူအကြိမ်ကြိမ်ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့သော သူဇာ့အပျိုစင်ဘဝလေးကို လက်လွတ်လိုက်ရသောကြောင့် သူဇာ့အားငြိုးကာ ဟော်တယ်ခေါ်ပြီး တဝကြီးလိုးရန် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူနှင့်သွားခဲ့သော ဟော်တယ်သို့ ခေါ်သွားလိုက်သည်။ ဟော်တယ်သို့ရောက်သော်….. “ကို သူဇာရေအရင်ချိုလိုက်ဦးမယ် ရဲဇော်တညလုံးပွကြမ်းထားတာ ရေတောင်မဆေးရတေး” “သူဇာရယ်ကိုမဆောင့်နိုင်တော့ဘူးကွာ လာပါချစ်ကြရအောင်” ကျော်ထက်လဲ ရဲဇော်သူဇာ့လိုးတဲ့အကြောင်းကို ကြားနေရင်းကို ကာမစိတ်တွေ တတ်လာနေသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ သူဇာ့ပွဲကြမ်းကာလိုးမည်ဟု ကြိတ်ကာဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူဇာလဲ ရဲဇော်တစ်ညလုံး လိုးထားသော်လဲ ကာမစိတ်များက မပျောက်သွားပဲ တတ်တတ်လာသည်။ သူဇာလဲအရမ်းရွလာကာ ကျော်ထက်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ကာ တောင်နေသောလီးကြီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့နှုတ်ခမ်းလေးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့အရသာကို မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ ခံစားနေသည်။ သူဇာလဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ ဒစ်ဖူးလေးကိုငုံပြီး သေချာစုပ်ပေးလိုက်သည်။ “အား……….. စုပ်တတ်လိုက်တာ သူဇာရယ် အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” သူဇာလဲရဲဇော်လီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်လီးက ကြီးလွန်းသောကြောင့် သူဇာ့ပါစပ်ထပြည့်ကာ လျှံထွက်နေသည်။
အား………… ကောင်းလိုက်တာကွာ သူဇာ ကို့ဥတွေရောစုပ်ပေးကွာ” သူဇာလဲ ကျော်ထက်ပြောသလို ဥတွေကိုပါစုပ်ပေးလိုက်သည်။ လက်ကလဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ ထုပေးရင်း ဥတွေကိုပါစုပ်ပေးလိုက်သည်။ “သူဇာရယ်… ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးကွာ လိုးကြရအောင်နော်” သူဇာမက်တတ်ရပ်လိုက်သည်နှင့် ကျော်ထက်က သူဇာ့ကိုဆွဲလည့်ကာ ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုနောက် သူဇာ့ထဘီးကိုမကာ ပင်တီလေးကို အောက်နဲနဲလေးဆွဲချကာ နောက်သို့ပြုးထွက်နေသော သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လီးကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်သည်။ သူဇာစောက်ဖုတ်က စောက်ရေများနှင့် ရဲဇော်လိုးထားသော လရည်များကြောင့် လီးကြီးက အဆင်ပြေချော့မွေ့စွာ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားသည်။
သူဇာလဲ လီးကြီးက ဆောင့်ကာတိုးဝင်လာသောကြောင့် သူဇာတစ်ချက်တွန့်သွာသည်။ ရဲဇော်လဲ သူဇာ့ခါးကိုကိုင်ကာ နောက်မှတရက်ဆက် ဆောင့်လိုးလိုသည်။သူဇာလဲ ကျော်ထက်ဆောင့်လိုးချက်များကို မွေ့ယာခင်းများကိုစုတ်ကာ ခံနေသည်။ ကျော်ထက်က သူဇာ့ရဲ့ အပျိုစင်မဟုတ်တော့တဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို တစက်မှမညှာပဲ ဆောင့်ကာဆောင်ကာ လိုးနေသည်။ ကျော်ထက်က သူဇာ့ကိုဆောင့်လိုးနေရင်း သူဇာ့ဖင်ကြီးကိုလဲ တစ်ဖက်တချက် ရိုက်ကာလိုးနေသည်။ “အား……… ကိုနဲနဲလျော့ပါဦး အား……..” “ရဲဇော်နဲ့တောင် တညလုံးအလိုးခံလာတာပဲ သူဇာခံနိုင်မှာပါ” ကျော်ထက်လဲ နဲနဲမောလာသောကြောင့် သူဇာ့ပေါ်မှောက်ကာလိုးရင်း သူဇာ့အင်္ကျီများကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် သူဇာ့နို့လေးများကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ချေကာ ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ သူဇာ့နို့လေးများသည် ကျော်ထက်ချေပေးမှုကြောင့် ရဲတတ်လာသည်။
သူဇာ့စောက်ဖုတ်မှာလဲ ရဲဇော်လိုးထားသောလရည်များနှင့် အသံမျိုးစုံ ထွက်နေသည်။ “သူဇာ ကုတင်ပေါ်တတ်ပြီး မှောက်ပေးနော် ကိုအပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးမယ်” သူဇာလဲ ကျော်ထက်ပြောသည်နှင့် ထဘီနှင့် ပင်တီလေးကိုချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တတ်ပြီး မှောက်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျော်ထက်က သူဇာ့ခါးအောင်တွင် ခေါင်းအုန်းတစ်ခု ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင် သူဇာ့စောက်ဖုတ်လေးသည် ပေါင်တန်သွယ်သွယ်လေးကြားမှ ပြုးထွက်ကာ ကျော်ထက်လီးကြီးကို စောက်ရည်တွေစိုရွဲကာ မျော်နေသည်။ ကျော်ထက်လဲ မှောက်ပေးထားသော သူဇာ့ပေါ်သို့ခွကာ သူဇာ့ပေါင်တန်သွယ်သွယ်လေးကြားမှ စောက်ဖုတ်လေးကို လီးကြီးဖြင့်ထိုးကာ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။
ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့ပေါ်မှောက်ကာ စောင့်လိုးနေသည်။ သူဇာကလဲ ကျော်ထက်လီးကြီး ဝင်ထွက်ကောင်းစေရန် ဖင်ကြီးကိုကော့်ကာ ကျော်ထက်စောင့်သမျှကို ခံနေသည်။ “အား………… အား……….. ကောင်းလိုက်တာကိုရယ် ဆောင့်လိုး သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကို ကွဲသွားအောင်ဆောင့်လိုးပေး” သူဇာလဲ ရမက်များထန်လာကာ ကျော်ထက်ကို စောင့်လိုးရန် တောင်းဆိုနေသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ လက်ကိုထောက်ပြီး သူဇာ့ဖင်ကြီးတွေ တုန်ခါနေအောင် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးနေလိုက်သည်။ “ကောင်းလိုက်တာသူဇာရယ် မင်းစောက်ဖုတ်က ရဲဇော်လိုးပြီးတာတောင် အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ” “သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကို ကြိုက်လားဟင်” “ကြိုက်တာပေါ့ကွ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အရင်ထဲကလိုးချင်နေတာ မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးက အရမ်းညှစ်တာကွာ”
“အတာဆို အမြဲတမ်းလိုးနော်” “အား……….. အား………….. သူဇာပြီးတော့မယ်ကိုရယ် မြန်မြန်လေးဆောင့်လိုးပေး” ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားပြင်းပြင်းဖြင့် ဆောင့်ကာ အချက်များများလိုးပေးလိုက်သည်။ သူဇာလဲ ဖင်ကြီးကိုကော့ကာ တဆက်ဆက်တုန်ရင်း ပြီးသွားသည်။ ကျော်ထက်လဲ သူဇာ့စောက်ဖုတ်ထဲက ညှစ်အားကြောင့် သူဇာနှင့်အတူတူပြီးသွားသည်။ ထိုနေ့က သူဇာနှင့်ကျော်ထက်တို့နှစ်ယောက် ဟော်တယ်တွင် အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ရက်လောက်ထိ သူဇာလမ်းပင်မလျောက်နိုင်ပဲ အိမ်တွင်းအောင်းနေခဲ့ရသည်။
“အား…….အား…… ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင်ကြီးကွာ ကိုကျော်ထက်က ဘယ်နှချီတောင် လိုးလိုက်တာလဲဟင်” “တစ်နေကုန်လိုးတာမောင်ရဲ့ ခိုင်မှာဖင်တွေကို ကျိန်းနေတာပဲ” “ကိုကျော်ထက်နဲ့ခံရတာ ကောင်းလားခိုင်” “အရမ်းကောင်းတာပေါ့ ကိုကျော်ထက်လီးကြီးက မောင့်ထက်ရှည်တယ်” “အား………. အား……….. မောင် ဖင်လိုးရင်း ဖုတ်ကိုပွတ်ပေး ခိုင့်ဖုတ်ကြီးယားလာပြီ ပြီးတော့မယ်” “မောင်လဲပြီးတော့မယ်ကွာခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်လဲ အပြိုင်ဆောင့်ကြရင်း ပြိုင်တူပြီးသွားကြသည်။ ရဲဇော်တိုက်ခန်းလေးထဲတွင် ခိုင်သူတို့အချစ်ပွဲ ပြီးကာ နှစ်ယောက်သားဖက်ကာ အမောဖြေနေကြသည်။ ခိုင်သူဖောက်ပြန်ပြီးသည့်နောက်တွင် ရဲဇော်စိတ်ထဲတွင် ခိုင့်သူကို တခြားတစ်ယောက်လိုးသည်ကို သဘောကြလာသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ခိုင်သူ့ကို ကျော်ထက်နှင့်လိုးသော အကြောင်းများကို မေးကာလိုးရသည်ကို နှစ်သက်လာတော့သည်။ ကျော်ထက်စိတ်ထဲတွင် ခိုင်သူ့ကို နှစ်ယောက်ပေါင်းကာ လိုးချင်သည့်စိတ်များ တိုးလို့လာနေသည်။ ခုဆို ခိုင်သူလဲ ကျော်ထက်နှင့်လိုးသည်များကို ပြောရသည်မှာ ရဲလာပြီးဖြစ်သည်။ ရဲဇော်ဒီနေ့တွင်တော့ သူဖြစ်ခြင်သည်များကို အကောင်ထည်ဖော်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ “ခိုင် မောင်ခိုင့်ကိုပြောစရာရှိတယ်” “ပြောလေမောင်ရဲ့ ဘာကိစ္စလဲ” “ဒီလိုလေ မောင်ခိုင့်ကို ကာမအရသာသစ်ခံစားစေချင်လို့ နောက်ပြီး မောင်လဲခံစားကြည့်ချင်လို့” “ဟင် မောင်ကခိုင့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲ ပြောကြည့်လေ”။
“ဒီလိုကွာ ခိုင့်ကို မောင်နဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ယောက်ညှပ်ပြီး လိုးကြည့်ချင်တယ်” “ဟာမောင်ကလဲ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာလဲ မောင်ကဖောက်ပြန်ချင်လို့ ခိုင့်ကိုရမယ်ရှာနေတာလား ” “မဟုတ်ပါဘူးခိုင်ရယ် အချစ်ကအချစ်လေ ခုဟာက ဆက်စီမှာ မောင်တို့နှစ်ယောက်တူတူ ပျော်ချင်လို့ မောင်ကခိုင်ကိုပဲချစ်တာပါဗျ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ မောင်ကခိုင့်ကိုလက်ထပ်မှာပါ” “အတာဆိုဘာလို့လဲ ခိုင့်ကိုဘယ်သူ့ကိုပေးလုပ်မလို့လဲ မောင်ရက်စက်တယ်ကွာ ခိုင့်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူး” “ဟာမဟုတ်ရပါဘူးခိုင်ရယ် ခုဟာက ခိုင်အဆင်ပြေမှပါ နောက်ပြီးခိုင်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့လူနဲ့မှပါ မောင့်စိတ်ထဲမှာ ခိုင်နဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လိုးတာကို ဖီးလ် ဖြစ်လို့ပါ”
“မောင်မမှတ်တေးဘူးလား မောင်ကိုလက်စားချေပြီး ခိုင့်ဖင်ကို သူများပါကင်ဖွင့်ခံလိုက်တာလေ မောင်ထက်ဖြစ်ချင်ရင်လုပ်လိုက်လေ” “ဟာရဲဇော်ရာ မင်းတကယ်ဟုတ်လို့လား” “ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်ထက်ရယ် ကိုကျော်ထက်ကရော ဖြစ်ရဲ့လား” “ဟ မင်းခွင့်ပြုတယ်ဆို ငါကတော့ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူဇာစိတ်ဆိုးမယ်ထင်တယ်” “အတာဆိုကိုကျော်ထက်က အဆင်မပြေဘူးလား” “ဟာမင်းကလဲ လုပ်မှာပေါ့ သူဇာ့ကိုပြီးမှချော့လိုက်မယ်” ရဲဇော်က ကျော်ထက်ကို ခိုင်သူအား နှစ်ယောက်ဝိုင်းညှပ့်ချရန် ပြောလိုက်သည်။ ကျော်ထက်ကို ခိုင်သူတောင်ဆိုခဲ့တာဖြစ်သည် ။ ခိုင်သူ့အတွေးမှာ ရဲဇော်က ကျော်ထက်ကိုစိတ်နာကာ ကျော်ထက်နှင့်တော့ သူမအားမလုပ်ဟုတွေးကာ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ရဲဇော်အတွေးထဲက ခိုင်သူ့ကိုဝိုင်းချရန် တွေးထားသော လူကလဲ ကျော်ထက်ပင်ဖြစ်သည်။ “တူ……. တူ……… ဟယ်လို မောင်” “ခိုင် မောင်တို့ဟိုကိစ္စအဆင်ပြေတယ် ကိုကျော်ထက်က လက်ခံတယ်ကွ မနက်ဖြန် မောင့်တိုက်ခန်းကို လာခဲ့နော်” “ဟာ မောင်တကယ်ကြီးလား မောင်ကကိုကျော်ထက်နဲ့ခိုင်ကို တကယ်ပေးနေမှာလား” “တကယ်ပေးနေမှာပေါ့ ခိုင်ပဲကိုကျော်ထက်ဆို လက်ခံတယ်ဆို” “ခိုင်က ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာ” “မရတော့ဘူးနော်ခိုင် မောင်ကအကုန်စီစဉ်ပြီးပြီ” “အင်းပါ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန်စနေနေ့ကြီးလေမောင် ” “သိတယ်လေခိုင်ရဲ့ ကျောင်းပိတ်မှ မမသူဇာမပါမှာပေါ့ကွ ဟုတ်ဘူးလား” “…….” ။စနေနေ့။ ခိုင်သူတစ်ယောက် မနက်အစောကြီးထဲကထကာ အလှတွေပြင်နေသည်။
အဝတ်စားများကိုလဲ ဆက်စီဖစ်တာများကို ရွေးကာဝတ်ဆင်နေသည်။ ခိုင်သူ့စိတ်ထဲတွင် ကျော်ထက်နှင့်ရဲဇော် နှစ်ယောက်ညှပ်ချမည်ကိုတွေးရင်း ရင်တွေခုန်နေသည်။ တကယ်တော့ခိုင်သူသည် ကျော်ကကို ကြိတ်ကြွေနေသည် ။ နောက်ပြီး ကျော်ထက်ရဲ့ အလိုးကျွမ်းကျင်မှုများကိုလဲ ခိုင်သူတစ်ယောက် စွဲလမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ခိုင်သူတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ပွဲစားဟုပြောကာ အိမ်မှ မနက်၉နာရီလောက်တွင် ထွက်လာခဲ့သည်။ ခိုင်သူသည် အပေါင်းသင်းပေါများသူမို့ မိဘများကယုံကြည့်သည်။ မယုံကြည်တာကတော့ သူဇာတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လဲ ရဲဇော်နှင့် ချိန်းထားသည်ဟုထင်ကာ ဒီတိုင်းပဲလွတ်လိုက်သည်။ ဒေါက်…. ဒေါက်.. ဒေါက်…. ခိုင်သူတံခါးခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရဲဇော်တံခါးကို အမြန်လာဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက် စားသောက်စကာများဝယ်ရမည်မို့ ခိုင်သူ့ကိုတစ်ယောက်ထဲထားခဲ့ကာ shopping center သို့ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ ခိုင်သူက အခန်းထဲတွင် ကျော်ထက်အလာကို တစ်ယောက်ထဲ ဆောင့်နေသည်။ ရဲဇော်ထွက်သွားပြီး ခဏအကြာတွင် ကျော်ထက်ရောက်လာသည်။ ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်က ရင်းနှီးထားသူများပီပီ ခိုင်သူက ကျော်ထက်ကိုဖက်ကာ အနမ်းများပေးရင်း စီးကြိုလိုက်သည်။ ရဲဇော်က ခိုင်သူနှင့်ကျော်ထက်အား ဧည်ခံရန် ပစ္စည်းများကို ပြည့်စုံအောင်ဝယ်နေသည်။
ခိုင်သူ့အတွက်ဝိုင်နှင့် သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် အရက်ပြင်းပြင်းကို ရွေးကာဝယ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် နဲနဲအပျော့သောက်ရန် ဘီယာပုလင်းများလဲ ဆွဲခဲ့လိုက်သည်။ ရဲဇော်တိုက်ခန်းပြန်ရောက်တော့ ၁၀နာရီပင် ကျော်နေပြီဖြစ်သည်။ ရဲဇော်လဲ အထဲကနှစ်ယောက် ဘာလုပ်နေမလဲသိချင်တာနဲ့ သော့ပိုတစ်ချောင်းနဲ့ ဖွင့်ကာ အိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့လိုက်သည်။ “အား….. အား……….” ထိုအသံကိုကြားလိုက်ချိန်တွင် ရဲဇော်အံသြသွားသည်။ ရဲဇော်စိတ်ထဲတွင် ထိုခြေနေလောက်ထိ ရောက်နေလိမ့်မည်ဟု့ တွေးမထားခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအသံများကိုကြားသည်နှင့် ရဲဇော်ရဲ့ ကားမစိတ်များလဲ ကြွကာလာခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ရဲဇော်သည် ဝယ်လာသောပစ္စည်းများကို စားပွဲပေါ်တွင်ချကာ အသံလာရာကို သွားလိုက်သည်။ အသံလာရာ အခန်းထဲတွင်……အသံလာရာမှာ အခန်းထဲမှဖြစ်သောကြောင့် ရဲဇော်လဲ အသံလာရာအခန်းထဲကို ဟနေသောတခါးမှ ကြည့်လိုက်သည်။ အခန်းထဲတွင် ခိုင်သူက သူဝတ်လာသော ဘောင်ဘီအတိုလေးကို ပေါင်လယ်လောက်ထိချွတ်ထားသည်။ အပေါ်ပိုင်းမှာလဲ အင်္ကျီအကြပ်လေးကို နို့များပေါ်အောင်လှန်ပေးထားသည်။ ကျော်ထက်ကလဲ ဂျင်းဘောင်ဘီကို ခြေသလုံးထိချွတ်ထားသည်။ ခိုင်သူက ကျော်ထက်လိုးရတာ အဆင်ပြေစေရင် ကုတင်ပေါ်သို့လက်ထောက်ကာ ကုန်းပေးထားသည်။
ကျော်ထက်ကလဲ ခိုင်သူ့နောက်မှ ခါးလေးကိုင်ကာ အားပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ကာလိုးပေးနေသည်။ ရဲဇော်လဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကာ လီးမှာတင်းကာတောင်လာသည်။ ရဲဇော်က သူ့ချစ်သူ ခိုင်သူအလိုးခံတာကိုကြည့်ရင်း ကာမရမက်များတိုးကာလာသည်။ ထိုကြောင့် ဘောင်ဘီ ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ကာ ဘောင်ဘီကို လီးပေါ်ရုံချွတ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ခိုင်သူတို့လိုးနေတာကိုကြည့်ရင်း တခါးပေါက်တွင်ရပ်ကာ ဂွင်းထုနေလိုက်သည်။ “ကိုကို ဆောင့်ပေး အရမ်းကောင်းတယ် ဆောင့်လိုးပေး” “လိုးပေးမှာပေါ့ခိုင်ရဲ့ ဖုတ်လေးကအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” ရဲဇော်လဲ အခန်းထဲမှနှစ်ယောက် စကားများကြားကာ လီးမှအလွန်တောင်လာသောကြောင့် ခက်သွက်သွက်လေး ထု့နေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ဆောင့်ပေးတာကို အားမရပဲ ဖင်ကြီးကိုနောက်ပြစ်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပေးနေသည်။
“ခိုင်သူ လက်လေးနဲ့ အစိလေးကို ပွတ်ကစားပါလား” “ဟုတ်ကိုကို ခိူင်သူ့ဖုတ်ထဲက အရည်တွေအရမ်းထွက်နေပြီ” “အရည်တွေစိုလာရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ ခိုင်သူရဲ့” ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူတို့လိုးပွဲကို မမှိတ်မသုန်းကြည့်နေသည။် လက်ကလီးကြီးကလဲ ခုတော့မှရမက်တွေထန်ကာ အရင်ကထက်ပင် ပိုကြီးနေသည်။ ရဲဇော်ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ ကျော်ထက်က ဆောင့်တာကိုရပ်ပြီး လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ထိုနောက်ခဏအကြာတွင် လီးကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်သွင်းကာ ညှောင့်လိုးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ အံလေးကြိတ်ကာ ကျော်ထက်လိုးသမျှကို ခံနေသည်။ “ခိုင်သူ မင်းဖုတ်ထဲကို မင်းလက်နှစ်ချောင်းထည့်ပြီး ဆွနေနော် ဒါမှရဲဇော်ပြန်လာရင် ခံစားရမဲ့အရသာကိုသိမှာ အားရမ်းကောင်းတာပဲကိုကိုရယ် ကို့လီးကြီးက အရမ်းစွဲစေတာပဲ ခိုင်သူတော့ အမြဲပဲလိုးခံချင်တော့တာ” ထိုချိန်မှ ရဲဇော်လဲ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ကိညုး ဖင်လိုးနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရသည်။
ထို့ကြောင့် ခိုင်သူ့အော်သံများသည် ရင်ခေါင်းသံပေါက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲဇော်လဲ ထိုးနှစ်ယောက်လိုးနေတာ ကြည့်ရင်း လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ဆက်တိုက်မြန်မြန် ထုချလိုက်တော့သည်။ ရဲဇော်လီးထိပ့်မှ လရည်များ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျသွားတော့သည်။ အခန်းထဲမှ ကာမသားကောင်နှစ်ဦးလဲ အရှိန်တွေမြင့်ကာ ခဏအကြာတွင် ပြီးသွားကြသည်။ သူတို့ပြီးသွားမှ အခန်းဝက ရဲဇော်ကိုတွေ့လိုက်ကြသည်။ “ဟာ ရဲဇော်” “ဟင် မောင်” “မောင်ဘယ်ချိန်ထဲက ရောက်နေတာလဲဟင်” “ငါတို့နှစ်ယောက်လဲ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်လို့ မင်းကိုမစောင့်ပဲ လိုးလိုကြတာ”။
“မောင်စိတ်ဆိုးနေပြီလားဟင်” “စိတ်မဆိုးပါဘူးခိုင်ရဲ့ ခိုင်တို့လိုးနေတာကိုကြည့်ပြီး မောင်လဲဖီးလ်အရမ်းတတ်လို့ ထုလိုက်တာ ခိုင်တို့ရှေ့လေးတင်ပြီးသွားတာ” “ရဲဇော် sorryပဲကွာ ငါမင်းကိုမစောင့်လိုက်မဘူး” “ဟာ မလိုပါဘူးကိုကျော်ထက်ရယ် ခုလိုဆိုတော့ ပိုတောင်ကောင်းသေး” ထို့နောက် ရဲဇော် ကျော်ထက်နှင့် ခိုင်သူတို့လဲ စားကြသောက်ကြသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ရဲဇော်နဲ့ခိုင်သူက တတွဲထိုင်နေသည်။ ကျော်ထက်ကတော့ သူတို့နဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်တွင် ထိုင်ကာ ရဲဇော်ဝယ်လာသော အရက်ပြင်းပြင်းကို ဇိမ်ခံကာ သောက်နေသည်။ ခိုင်သူကတော့ ဝိုင်တင်အားမရပဲ ဘီယာများကိုပါ ရောသောက်နေသည်။
ခိုင်သူလဲ မျက်နာများနီရဲကာ မူးလာသည်။ “ကိုကျော်ထက် ခိုင်သူ့ဘေးလာထိုင်လေ ဒီမှာအကျယ်ကြီး ရှိတေးပါတယ်” ခိုင်သူလဲမူးကာ ကျော်ထက်ကို သူမဘေးတွင်လာထိုင်ရန် ခေါ်လိုက်သည်။ ရဲဇော်နှင့် ကျော်ထက်တို့လဲ မှန်လာကြသည်။ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူဘေးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ခိုင်သူက ရဲဇော်နှင့် ကျော်ထက် နှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တလှည့် အရက်တိုက်လိုက်သည်။ထို့နောက် ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ပေါင်လေးမှစကိုင်ကာ ဘောင်းဘီပော်မှ ဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်ကတော ခိုင်သူ့နို့လေးမျာကို ဖော်ကာ စို့နေသည်။ ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ခါးပတ်ကိုချွတ်ကာ ဘောင်ဘီထဲမှ လီးကြီးကိုထုတ်ကာ ထုပေးနေလိုက်သည်။ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့အင်္ကျီလေးနှင့် ဘော်လီလေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။
ခိုင်သူလဲ မက်တ်ရပ်ကာ ဘောင်းဘီးလေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ့ပင်တီလေးကို သူကိုယ်တိုင်ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူပြန်ထိုင်လိုက်ချိန်တွင် ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ဖုတ်လေးကို နှုတ်ခမ်းနှင့်တေ့ကာ ဂျာပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်လေးအားနမ်းသမျှကို ခံစားနေသည်။ ထိုချိန်တွင် ကျော်ထက်က အဝတ်စားများကိုချွတ်ကာ ခိုင်သူ့နှုတ်ခမ်းသို့ သူ့လီးကြီးထိုးပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကို အလိုက်သိစွာ စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့ခေါင်းကိုကိုင်ကာ လီးကြီးကို ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ ထိုးထည့်လိုက်သည်။
ရဲဇော်ကလဲ ခိုင်သူ့စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားများကို စွဲစုပ်ကာ စိလေးကိုယက်ရင် ဂျာပေးနေလိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ပါစပ်မှလီးကိုစုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ယက်ခံရသည်ကို အရမ်းကြိုက်နေပြီး ဖြစ်သည်။ ခိုင်သူလဲ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရမ်းယားကာ ကာမရမက်များထန်လာသည်။ “ခိုင် မောင့်ကိုကုန်းပေးနော် မောင်ခိုင့်ဖင်ကို လိုးပေးမယ်” ခိုင်သူလဲ ရဲဇော်ပြောသည့်အတိုင်း ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ရဲဇော်က စောစောက ကျောက်ထက်လိုးထားသော ခိုင်သူ့ဖင်လေးကို စစချင်းထဲက ဆောင်ကာလိုးလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့ဖင်ထဲတွင် ကျော်ထက်လရည်များက ရှိနေသေးသောကြောင့် ရဲဇော်လီးကြီးမှာ ချော့မွေ့စွာဝင်သွားသည်။ စစချင်းမှာ ဆောင့်သွင်းခံလိုက်ရသောကြောင့် ခိုင်သူတစ်ချက်တွန့်ကာ သွားသည်။
ပါစပ်မှအော်လိုက်သော်လဲ ကျော်ထက်လီးကြီးကိုစုပ်ရက်နှင့်မို့ အသံမထွက်လိုက်ပေ။ ရဲဇော်က နောက်မှ ခိုင်သူ့ဖင်ကို ဆောင့်လိုးသလို ကျော်ထက်ကလဲ ခိုင်သူပါစပ်ကို ဆောင့်ကာဆောင်ကာ လိုးလိုက်သည်။ ခိုင်သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် ကျော်ထက်လီးကြီးက ပြည့်သိပ့်ကာ လည်ချောင်းထဲထိရောက်ရောက်သွားသည်။ နောက်မှလဲ ရဲဇော်ဆောင့်ကာ ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း ခိုင့်သူစအိုသားများပါ ကပ်ကာကပ်ကာ ပါပါလာသည်။ “ကိုကို ထိုင်လိုက်ပါလား ခိုင်သူအပေါ်ကနေ တတ်ဆောင့်ပေးမယ်” ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူပြောသည့်အတိုင်းထိုင်ကာ တောင်နေသောလီးကြီးကို လိုင်ကာ စောင့်နေလိုက်သည်။ ထိုချိန်မှ ရဲဇော်ကလဲ ဖင်ထဲမှ လီးကြီးကိုချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခိုင်သူက ကျော်ထက်ပေါ်တတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ကျော်ထက်လီးကြီးကို ကိုင်ကာထည့်ပေးရင်း ထိုင်ချလိုက်သည်။ ရဲဇော်က နောက်မှနေပြီး လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ထုရင်းကြည့်နေလိုက်သည်။
ခိုင်သူကလဲ ကျော်ထက်ပေါ်တွင် အားပြင်းပြင်းနှင့်ဆောင်ကာ လိုးနေသည်။ ကျော်ထက်က ခိုင်သူ့အိုးကြီးကိုကိုင်ကာ ခိုင်သူ့နှုတ်ခမ်းအားနမ်းနေသည်။ရဲဇော့် တိုက်ခန်းလေးထဲတွင် ကျော်ထက်နှင့် ခိုင်သူတို့ လိုးသံများ ဆူညံနေသည်။ ရဲဇော်လဲ ခိုင်သူ၏ တဏှာရမက်များပြင်းပြင်းနှင့် ဆောင့်လိုးနေမှုများကို ကြည့်ရင်း ရမက်စိတ်များပိုပိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ခဏအကြာတွင်ရဲဇော်က ခိုင်သူ့ခါးကိုထိန်းကိုင်လိုက်ကာ ခိုင်သူ့ဖင်ထဲသို့ လီးကြီးကိုထိုးစိုက်ကာ လိုးလိုက်သည်။ ဒီတခါတွင်တော့ ခိုင်သူတစ်ယောက် ကျော်ထက်နှင့် နှုတ်ခမ်းခြင်းဂဟေဆက်ကာ မနမ်းနိုင်တော့ပေ။
အား…….. အား……. “မောင် ဖြေးဖြေး လီးကြီးနှစ်ချောင်းဝင်နေတာ ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးကွာ” ကျော်ထက်ကလဲ ရဲဇော်လီးကြီး ကောင်းကောင်းဝင်လာနိုင်စေရန် ခိုင်သူဖင်ကြီးကို ဖြဲပေးထားလိုက်သည်။ ခိုင်သူသည် ခုမှလီးနှစ်ချောင်စခံတာမို့ လီးနှစ်ချောင်းဒက်ကို ကောင်းကောင်းခံနေရသည်။ ကျော်ထက်နဲ့ ရဲဇော်ကလဲ လီးကြီးများကို အဆုံးထိထည့်ကာ ဖိပြီးကပ်ညှောင့်နေကြသည်။ ခဏအကြာတွင် ခိုင်သူလဲ ငြိမ်သွားကာ လီးနှစ်ချောင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်လာသည်။ ခိုင်သူခံနိုင်လာတာကိုသိသော ရဲဇော်နဲ့ကေထ်ာထက်ကလဲ စည်းချက်ညီညီ နှစ်ယောက်သား ဆောင့်ကာလိုးလိုက်ကြသည်။ ခိုင်သူကလဲ လီးနှစ်ချောင်အရသာကိုသိကာ အားမရနိုင်တော့ပဲ အလည်မှနေပြီး လီးနှစ်ချောင်ကိုပြန်ကာ ဆောင့်နေသည်။သုံးယောက်သား အခန်းထဲတွင် အသံမျိုးစုံထွက်အောင် လိုးနေကြသည်။ ဆက်တိုက်ဆောင်ကာ လိုးနေကြသောကြောင့် မောလာကြသည်။
ခဏဖိကပ်ကာ ညှောင့်လိုးကြပြီး ပုံစံပြောင်းလိုက်သည်။ ရဲဇော်က မက်တတ်ရပ်ပြီ ခိုင်သူနဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်နေကာ ခိုင်သူ့ပေါင်ကိုမလိုက်ပြီး လီးကြီးကိုထည့်လိုက်သည်။ ခိုင်သူကလဲ ရဲဇော်လည်ပင်းကိုသိုင်းဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျော်ထက်က နောက်မှနေ၍ ခိုင်သူ့ဖင်ထဲကို လီးကြီးထည့်ကာ ခပ်စပ်စပ်လေး ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ ကျော်ထက်က ဖင်လိုးနေရင်း ခိုင်သူ့နို့လေးများကို နောက်မှနိုက်ကာ လိုးနေလိုက်သည်။ ရဲဇော်နဲ့ ကျော်ထက်လဲ ခိုင်သူ့ကို အပြိုင်ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်သည်။ ဆောင့်ကာလိုးနေရင်း ခဏအကြာတွင် သုံးယောက်သား အားပြင်းပြင်းနှင့်ဆောင့်ကာ ပြိုင်တူပြီးသွားကြသည်။ ထိုနေ့တွင် ခိုင်သူ ညနက်မှ အိမ်ပြန်ကာ သုံးသောက်သား တစ်နေကုန် လိုးဆော်ခဲ့ကြလေတော့သည် …….. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပွိုငျအဆိုငျ